09/15/13 ~ Myanmar Forward
Posted by drmyochit Sunday, September 15, 2013, under ကျန်းမာရေး | No comments
တစ်ကိုယ်ရည် အာသာဖြေခြင်းကို အရွယ်ရောက်ပြီး အမျိုးသားတိုင်းနီးပါး သိကြပြီး အများစုက ပြုလုပ်ကြလေ့ ရှိကြပါတယ်။ ဒီကိစ္စဟာ ဘယ်လို ဆိုးကျိုး ကောင်းကျိုးတွေ ရှိသလဲဆိုတာ ဂဃနဏ သိတဲ့သူ တော်တော်နည်းပါတယ်။ ကိုယ့်ထက်ကြီးတဲ့သူတွေ အပေါင်းအသင်းတွေ ပြောတာကိုပဲ ဟုတ်နိုးနိုးနဲ့ လက်ခံနေရတာ များပါတယ်။ ဒီတော့ ကမ္ဘာတစ်ဝန်းမှာ ရှိတဲ့ အမျိုးသားကျန်းမာရေး ဆိုင်ရာ အထူးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များက အမျိုးသား သန်းပေါင်းများစွာ (အာရှ၊ ဥရောပ၊ အမေရိကနဲ့ အာဖရိကပါမကျန်) အပေါ်ကို လေ့လာတွေ့ရှိ အတည်ပြုထားတဲ့ တစ်ကိုယ်ရည် အာသာဖြေခြင်း ဆိုင်ရာ တွေ့ရှိချက်တွေကို စုစည်းဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ ဘယ်သူပြောတာမှ မယုံပါနဲ့။ သိပ္ပံနည်းကျတဲ့ လက်တွေ့ဆေးပညာစမ်းသပ်မှုတွေကို ဖတ်ကြည့်ပြီး အမှန်သိနိုင်ကြပါစေ။
(အောက်မှာ ဖော်ပြထားတဲ့ အကြောင်းအရာများဟာ မည်သည့် ဘာသာရေး၊ လူမှုရေး၊ ယဉ်ကျေးမှု၊ စသည့် ရှုထောင့်များကိုမှ ကိုယ်စားမပြုဘဲ ကျန်းမာရေးရှုထောင့် သီးသန့်မှ ဖော်ပြထားခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော့်အနေနဲ့လည်း သဘောတူခြင်း မတူခြင်း ကို ကိုယ်စားမပြုဘဲ ဖတ်ရှုသူများ ကိုယ်တိုင်ကသာ ကောင်းကျိုး ဆိုးကျိုး အပေါင်းအနှုတ် လက္ခဏာများကို ခွဲခြားပိုင်းဖြတ်ကြစေလိုပါတယ်)
(၁) တစ်ကိုယ်ရည် အာသာဖြေခြင်းသည် ပုံမှန်မဟုတ်ရယ်လို့ မရှိပါ
အရွယ်အမျိုးမျိုး အမျိုးသားများဟာ မကြာခဏဆိုသလို “တစ်ကိုယ်ရည် အာသာဖြေခြင်းဟာ ဆိုးကျိုးတစ်စုံတစ်ရာများ ရှိနေမလား၊ ပုံမှန် (normal) မှဟုတ်ရဲ့လား၊ ငါ့စိတ် ငါ့ကိုယ်ကပဲ မှားနေတာလား” ဆိုပြီး သံသယပေါ်ပေါ်လာကာ စူးစမ်းစိတ် ၀င်လာတတ်ကြပါတယ်။ ဒီကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ရင် တကယ့် ဆေးပညာရှင်များကတော့ ပုံမှန် နဲ့ ပုံမမှန် (normal against abnormal) ဆိုပြီး ခွဲခြားပြဖို့ မလုပ်ချင်ကြပါဘူး။ ဘာလို့လဲ ဆိုတော့ ပုံမှန် နဲ့ ပုံမမှန်ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပာယ် သတ်မှတ်ချက် စံနှုန်း အနေနဲ့ ဒီကိစ္စကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာလို့ မရပါဘူး။
ရှင်းအောင် ပြောရရင် ပုံမှန် နဲ့ ပုံမမှန် ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပာယ်နှစ်ခု စလုံးကို မရှိတာပါ။ (လုပ်ချင်လုပ်၊ မလုပ်ချင်နေ လုပ်ခြင်းရော မလုပ်ခြင်းမှာပါ ကြီးမားတဲ့ ပြဿနာ မရှိဘူး လို့ ဆိုလိုပါတယ်) ကောင်းကျိုး ဆိုးကျိုး (အဓိကပြောချင်တာကတော့ ဆိုးကျိုး ဆိုပါတော့) တွေဟာ အကြိမ်အရေအတွက်နဲ့ လုပ်ပုံလုပ်နည်းတွေ ကြောင့်သာ ကွဲပြားကြရတာ ဖြစ်ပါတယ်။
“ကျွန်တော်တို့ လူသားတွေကြားမှာ စံသတ်မှတ်ချက် အတိုင်းအတာတွေ ခိုင်ခိုင်မာမာ တည်ဆောက်ဖို့ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ အရမ်းကို ကွဲပြားခြားနားနေကြလို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကိုက သဘာဝလည်း ဖြစ်ပါတယ်” လို့ နယူးယော့ခ် အခြေစိုက် လိင်မှုဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင် (Sexologist) တစ်ယောက်ဖြစ်သူ ဒေါက်တာ Betty Dodson က ပြောပြခဲ့ပါတယ်။ သူဟာ နာမည်ကျော် စာအုပ်တစ်အုပ် ဖြစ်တဲ့ Sex for One ဆိုတဲ့ စာအုပ် ရေးသားသူလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ (Sex for One ကို တစ်ဦးတစ်ယောက်စီအတွက် လိင်မှုဘ၀ လို့ဘာသာပြန်ရင် ဆီလျော်မယ်ထင်ပါတယ်)
နောက်ပညာရှင် တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ The Big Book of Masturbation စာအုပ်ရဲ့ စာရေးသူ Martha Cornog ကလည်း “အမျိုးသားတိုင်း နီးပါးဟာ တစ်ကိုယ်ရေ ဆန္ဒဖြေခြင်းကို လက်ကိုသုံးလို့ ဖြစ်စေ၊ တစ်ခုခုနဲ့ ပွတ်သပ်လို့ ဖြစ်စေ၊ လိင်ဖျော်ဖြေရေး ကိရိယာ (sex toy) တစ်ခုခုကို ဒါမှမဟုတ် အခြား အိမ်ထဲက ရရာ တစ်ခုကို သုံးလို့ ဖြစ်စေ၊ စာအုပ် ရုပ်ပုံ ဗီဒီယို စတာတွေ ကြည့်ပြီး ဖြစ်စေ ခန္ဓာကိုယ်နေဟန် အမျိုးမျိုးနဲ့ လုပ်ကြတာ ချည်းပါပဲ။ တချို့ဆို မှန်ထဲတောင် ကြည့်ပြီး လုပ်ဖူးကြပါတယ်” လို့ ရှင်းပြပါတယ်။
ဒီနေရာမှာ အရမ်းအရမ်း အရေးကြီးတာ တစ်ခု ပြောပြရရင် မှန်ထဲကြည့်ပြီး အာသာဖြေတယ် ဆိုရာမှာ ကိုယ့်ပုံရိပ်ကို ကိုယ် ကြည့်ပြီး လုပ်တယ်ဆိုရင် ပြဿနာ မရှိဘူး။ ဒါဟာ သဘာဝအတိုင်း ဖြစ်ပါတယ်။ အကယ်၍ အရွယ်ရောက်ပြီး ယောက်ျားတစ်ယောက်ဟာ မိန်းမအ၀တ်အစားတစ်ခုခု ဥပမာ အတွင်းခံ စတာတွေကို ၀တ်ပြီးမှ မှန်ထဲမှာ ကြည့်ပြီး လုပ်တတ်တာဆိုရင်တော့ ဒါဟာ လုံးဝလုံးဝ ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ လိင်ဆိုင်ရာ အမူအကျင့် တွေထဲက တစ်ခု (one of the abnormal sexual behaviors) ဖြစ်ပါတယ်။ စိတ်ရောဂါ တစ်မျိုး ဖြစ်ပြီး ရှိမှန်း သိနေရင် ကုသဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ထပ်ပြီး အသေးစိတ် ပြောရရင် ငယ်ငယ်က အပေါင်းအသင်းနည်းပြီး အိမ်ပြင် သိပ်မထွက်ရတဲ့ မိဘက အရမ်းချုပ်ခြယ်တဲ့ ကောင်လေးအချို့မှာ ဒီအမူအကျင့်မျိုး ရှိနေတတ် တယ်လို့ ပညာရှင်များ ဆိုပါတယ်။ ဘယ်လိုဘဲ ဖြစ်ဖြစ် ၁၃ နှစ်မကျော်သေးတဲ့ ကောင်လေးတွေမှာ ဒီအပြုအမူမျိုးတွေ တွေ့ရင် abnormal လို့ ချက်ချင်း စာရင်းမသွင်းသေးဘဲ စောင့်ကြည့်ရင်း အရွယ်ရောက်လာရင် အလိုလို ပျောက်သွားတတ်တာကိုလဲ တွေ့ရပါတယ်။ မပျောက်သွားမှသာ ရောဂါ ဖြစ်ပါတယ်။
(ဒီလို ပြဿနာမျိုးကနေ စလို့ ဘယ်လို ပြဿနာမျိုး ဖြစ်ဖြစ် တိုင်ပင် ကုသ ပျောက်ကင်းချင်တယ် ဆိုရင်တော့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ အတော်ဆုံး Sexologist တစ်ယောက် ဖြစ်တဲ့ ဒေါက်တာသီဟသစ်ရဲ့ Two-Body-Tiger Specialist Clinic မှာ သွားရောက် ပြသနိုင်ပါတယ်။ ဤကား စကားချပ်) Tongue out
(၂) တစ်ကိုယ်ရည် အာသာဖြေခြင်းဟာ အလွန်အန္တရာယ်မရှိပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ၁၀၀% ဘေးကင်းတာတော့ မဟုတ်ဘူး။
အဖော်တစ်ယောက်ယောက်နဲ့ ဆက်ဆံတာနဲ့မတူဘဲ တစ်ကိုယ်ရည် အာသာဖြေခြင်းဟာ သင့်ကို ဘယ်လို လိင်မှတစ်ဆင့် ကူးစက်သော ရောဂါမျိုး ကိုမှ မပေးပါဘူး။ အဖော်နဲ့ ဆက်ဆံခြင်းမှာ ရနိုင်တဲ့ ကိုးရိုးကားယားနိုင်တဲ့ ကြွက်သားညောင်းညာမှု တွေကိုရစရာ အကြောင်းကိစ္စလည်း မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ ဘယ်လိုပဲ ပြောပြော တစ်ကိုယ်ရည် အာသာဖြေခြင်းကို လုံးဝ ဘေးကင်းတဲ့ ကိစ္စပါလို့တော့ အာမမခံနိုင်ပါဘူး။
“တစ်ကိုယ်ရည် အာသာဖြေခြင်းဟာ ရှိသမျှ နည်းလမ်းတွေထဲမှာ အန္တရာယ် အကင်းဆုံး လို့ပဲ ပြောနိုင်တာပဲ ရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တစ်ကိုယ်ရည် အာသာဖြေခြင်း လုပ်လိုက်လို့ ခန္ဓာကိုယ်ထဲက ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဇီဝပိုင်းဆိုင်ရာ မှန်ကန်မှု နိယာမတွေ ရပ်ဆိုင်း သွားမှာတော့ မဟုတ်ပါဘူး” လို့ Cornog ကဆက်ပြောပြပါတယ်။
အကြိမ်အရေအတွက် များများ (သို့) ကြမ်းတမ်းစွာ တစ်ကိုယ်ရည် အာသာဖြေခြင်းကတော့ လိင်တံရဲ့ အရေပြားကို ထိခိုက်ပွန်းပဲ့စေတယ် ဆိုတာ အမျိုးသားတိုင်း သိကြမှာပါ။ ဒီနေရာမှာ သာမန်လုပ်နေကျ လက်နဲ့မျိုး မဟုတ်ဘဲ အပြားအချပ် တစ်ခုခု၊ ခေါင်းအုံး သို့မဟုတ် အောက်ခံအခင်း တစ်ခုခုကို ဆန့်ကျင်တွန်းခြင်း စတဲ့ နည်းတွေနဲ့ လုပ်ရင်တော့ ဆီးလမ်းကြောင်း (urethra) ကို ထိခိုက်ဒဏ်ရာ ရနိုင်ပါတယ်။
အဲလို ဖြစ်ရင် သိသာတဲ့ လက္ခဏာတွေက ဆီးသွားရင် နာခြင်း၊ စသွားသွားခြင်းမှာ သွေးရောင်ပါပြီး နောက်ပိုင်းမှာ မပါတော့ခြင်း၊ ဆီးထွက်ခြင်းသည် ပိုက်မှ ထွက်သကဲ့သို့ ရေစီးကြောင်းပုံစံ မဟုတ်ဘဲ ကျဉ်းကျပ်သော မူမမှန်လမ်းကြောင်းကို တွန်းထွက်ရသလိုမျိုး (spray ဖျန်းသကဲ့သို့ဟု ပညာရှင်များက ဥပမာပေးထားသည်) ဖြစ်ခြင်း စတာတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလို ဖြစ်သွားတဲ့ လူအချို့ဆို ထိုင်လျက် မတ်တပ်ရပ်လျက် ဘယ်လိုမှကို ဆီးသွားလို့ မရတော့ဘဲ အရမ်းနာနေတတ်ပါတယ်။ ဒါဆို ဆရာဝန်နဲ့ ပြဖို့ လိုအပ်ပါပြီ။ ဒါပေမဲ့ ဒီလောက်ထိ ဖြစ်သွားတာကတော့လည်း ရှားပါတယ်။
အရမ်းအရမ်းဆိုးတဲ့ ကိစ္စတွေမှာ ဆိုရင်တော့ လိင်တံတောင် ကျိုးနိုင်ပါသေးတယ်။ အမျိုးသား တန်ဆာရဲ့ ရေမြှုပ်ဆန်တဲ့ တစ်သျှူးအလွှာများကို ဖုံးအုပ်ပေးထားတဲ့ အဖြူရောင် tunica albuginea ဆိုတဲ့ အလွှာအထိ စုတ်ပြဲသွားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အရမ်းကို နာကျင်တဲ့ အခြေအနေ တစ်ရပ်ပါ။ ဖြစ်ရတဲ့ အကြောင်းအရင်းကတော့ တစ်ကိုယ်ရည် အာသာဖြေခြင်းမှာ စတန့်ထွင်ပြီး လုပ်လို့ မာတောင့်နေတဲ့ တန်ဆာကို မာကျောတဲ့အရာဝတ္ထု တစ်ခုခုနဲ့ မတော်တဆ ရိုက်မိလို့ ဖြစ်စေ၊ အောက်ကို လှန်ချိုးလိုက်မိလို့ ဖြစ်စေ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် တစ်ကိုယ်ရည် အာသာဖြေခြင်းမှာ ဘေးကင်းချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ထူးခြားဆန်းပြား ကမ္ဘာတစ်လွှားတွေ သိပ်မလုပ်ကြပါနဲ့၊ ထူးဆန်းထွေလာ ဟိုအရာ တွေ သိပ်မသုံးကြပါနဲ့၊ တော်ကြာ ထူးထွေတည့် အံ့ရာသော် အဖြစ်တွေ ကြုံနေရဦးမယ် လို့ ကျန်းမာရေးသတိ ပေးချင်ပါတယ်။ အဖော်နဲ့မှာလည်း ဖြစ်တတ်လို့ သတိထားသင့်ပါတယ်။
(မြန်မာပြည်မှာတော့ ဒါမျိုးတွေက တော်တော်ရှားပါသေးတယ်။ နောင်တော့လဲ
ပြောမရဘူးပေါ့။ ဒါမျိုးတွေလာရင် အရေးပေါ် ချုပ်၍ပြုပြင်ပေးခြင်း Emergency Repair လုပ်ပေးတတ်အောင် ဆရာဝန်တွေ ကျင့်ထားသင့်ပါတယ်။ စကားမစပ် ထပ်ပြောရရင်တော့ ဘေးကင်းတဲ့ ချောဆီလို ဟာမျိုးကတော့ ပညာရှင်တွေ တားမြစ်ထားတဲ့ အထဲမှာ မပါပါဘူး)
(၃) တစ်ဦးတည်း ဆန္ဒဖြေဖျောက်ခြင်းဟာ လိင်မှုဘ၀မှာ စွမ်းအား အလေ့အကျင့်တစ်ရပ် ဖြစ်စေပါတယ် (သို့) ပျက်စီးဆုံးရှုံးစေပါတယ်
တစ်ကိုယ်ရည် အာသာဖြေခြင်းဟာ အဖော်နဲ့ကျရင် တကယ်ကောင်းမွန်တဲ့ အဖြစ်ကို ရစေတယ်ဆိုတဲ့၊ တကယ့် ဆုလာဘ် (real boon) ကိုရစေတယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်းတရားတွေ အများကြီး ရှိပါတယ်။
ဒါဟာ အမျိုးသားတစ်ဦးချင်းစီကို မိမိရဲ့ တုန့်ပြန်မှု အနှေးအမြန်ပုံစံ ကို သိရအောင် သင်ကြားပေးပါတယ်။ ဘယ်လိုခံစားချက်ဆိုရင် သာယာတယ်၊ မသာယာဘူး၊ ဘယ်လိုခံစားချက် လာပြီး နောက်ဆိုရင် ပြီးဆုံး တတ်တယ် စတဲ့ တန်ဖိုး ရှိတဲ့ အချက်တွေကို သိရှိစေပါတယ်။ ဒါဟာ အဖော်နဲ့ ပွင့်လင်းစွာ စကားပြောတဲ့အခါမှာ နှစ်ဦးနှစ်ဖက် သူ့အကြိုက် ကိုယ့်အကြိုက် ညှိနှိုင်းနိုင်ခြင်း၊ အထွတ်အထိပ် ခံစားချက် (orgasm) မရောက်ခင်လေးတင်မှာ ရှိတဲ့ “ရှောင်လွှဲမရသော အခိုက်အတန့်” (moment of inevitability) မှာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပြန်ထိန်းလိုက်နိုင်အောင် အလေ့အကျင့် ဖြစ်စေတဲ့အတွက် အချိန်မတန်မီ သုက်လွှတ်ခြင်း (premature ejaculation) ကိုလည်း ဟန့်တားရာမှာ အကျိုးရှိစေ ပါတယ်။
နောက်ထပ် အရေးကြီးဆုံး အချက်လို့ ဆိုနိုင်တဲ့ အချက်တစ်ချက်ကတော့ ဒါဟာ အမျိုးသားတိုင်းအတွက် အဖော်နဲ့ တူတူနေလို့ ယာယီ မရနိုင်သေးခင်မှာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို နိုင်နိုင်နင်းနင်း ထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့ နည်းလမ်းဖြစ်စဉ် တစ်ရပ် ဖြစ်တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ (နို့မို့ ရာဇ၀တ်မှုတွေ ကူးစက်ရောဂါတွေဆီကို ဦးတည်သွားနိုင်စေကြောင်း တွေးကြည့်လို့ ရပါတယ်)
ဗဟုသုတအနေနဲ့ ဖော်ပြရရင် အချို့ အမျိုးသမီးတွေက အမျိုးသားတွေ ခေါ်သလောက် မလိုက်နိုင်ကြပါဘူး။ အလွန်ဆုံး နှစ်ခါထက် ပိုစိတ်မပါတော့ဘဲ ဒါမှမဟုတ် ခန္ဓာကိုယ်က မခံနိုင်တော့ဘဲ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဒါကို အကြိမ်အရေအတွက် နှစ်သက်မှုကွာဟချက် (disparity in frequency preference) လို့ ခေါ်ကြောင်းပါ။
ဒီလို ဖြစ်နေရင် များသောအားဖြင့် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ချို့ယွင်းမှုကြောင့်ထက် အရှက်အကြောက်ကြီးမှု၊ အတွေ့အကြုံနည်းမှု၊ မ ဟော်မုန်းအားနည်းမှု၊ အိမ်မှုကိစ္စပင်ပန်းမှု၊ စိတ်ဖိစီးမှု စတဲ့ အချက်တွေကြောင့် ဖြစ်ရတာ ဖြစ်ပြီး ထွေထွေထူးထူး ဆေးကုဖို့ မလိုပါ။ အာဟာရမျှအောင် စားပေးပြီး အထက်ပါအချက်တွေကို စဉ်းစားစစ်ဆေး ပြုပြင်ပေးလိုက်ရုံနဲ့ နှစ်ဦးကြားက ကွာဟချက် ကျဉ်းမြောင်း သွားပါလိမ့်မယ်။
အချို့အမျိုးသားတွေကျတော့ သူတို့ရဲ့ အဖော်နဲ့ တူတူနေရခြင်းအပေါ်မှာ စိတ်ပါဝင်စားမှု လျော့နည်းစပြုလာတဲ့အတွက် တစ်ကိုယ်တော်လိင်မှုကိစ္စ (solo sex) အပေါ် စွဲလမ်းခုံမင် လာတတ်တာမျိုးလည်း ရှိပါတယ်။ ဒီလိုတင်းချက်ရှိလာလို့ အဖော်နဲ့ ခွဲခြားနေထိုင်လိုစိတ် ပေါ်လာခြင်းဟာ သူတို့နှစ်ဦးရဲ့ ဆက်ဆံရေး၊ အိမ်ထောင်ရေးမှာ အနုတ်လက္ခဏာ ဆောင်စေမလားလို့ တော်တော်များများ သံသယ ရှိတတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ပါရဂူတွေက ဒီအချက်ကို အလျင်အမြန် စမ်းသပ် စစ်ဆေး ဖော်ထုတ်ခဲ့ကြရာမှာ တွေ့ရှိရတာကတော့ အိမ်ထောင်သို့မဟုတ် လက်ရှိလက်တွဲဖော် ရှိနေရင်တောင်မှ အမျိုးသားတွေရဲ့ တစ်ကိုယ်ရည် အာသာဖြေခြင်းဟာ ချွတ်ယွင်းချက်မဲ့ ပြဿနာမရှိ (perfectly OK) ပါတဲ့။
သူတို့ ပြောချင်တဲ့ နှစ်ချက်က
(၁) အဖော် (သို့) အိမ်ထောင်ရှိနေတဲ့ အမျိုးသားတစ်ယောက်ဟာ တစ်ကိုယ်ရည် အာသာဖြေတယ် ဆိုရင် သူ့နဲ့ အဖော်ကြားမှာ အိမ်ထောင်ဖက်နဲ့ ကြားမှာ ပြဿနာတစ်စုံတစ်ရာ ရှိတယ်လို့ မဆိုနိုင်ပါဘူး။
(၂) အဲလိုလုပ်လို့လည်း အဖော်အပေါ်မှာ ငြီးငွေ့စိတ်ကုန်သွားခြင်း ဖြစ်စေနိုင်ခြင်း မရှိပါဘူး……..တဲ့။
(၄) အချို့သော တစ်ကိုယ်ရည် အာသာဖြေခြင်း နည်းလမ်းများသည် ပန်းသေ ပန်းညှိုးခြင်းအထိ ဖြစ်စေနိုင်သည်။
ပုံမှန်အဖော်နဲ့ ရတဲ့ လှုံ့ဆော်မှုမျိုးတွေနဲ့ မတူတဲ့ လှုံ့ဆော်မှု ပုံစံတွေသုံးပြီး ခဏခဏ ရအောင် နှိုးဆွတတ်တဲ့ (ဥပမာ တန်ဆာကို တစ်ခုခုနဲ့ မြန်မြန်ရိုက်တာ၊ အရမ်းညှစ်တာ၊ အရမ်းပွတ်တာ စတဲ့နည်းလမ်းတွေ လုပ်တတ်တဲ့) အမျိုးသားတွေဟာ သုက်လွှတ်မြန်တတ်တာ သုက်လွှတ်နည်းတတ်တာတွေ ဖြစ်တတ်ပါသတဲ့။ အထွတ်အထိပ်ခံစားမှု ရတာ ခဏလေးပဲ ခံစားရပြီး ခံစားချက်က မြင့်မားကောင်းမွန်ခြင်းလည်း လျော့နည်းသွားပါသတဲ့။
(ကျွန်တော့် အရင်းအနှီးဆုံး ငယ်သူငယ်ချင်း နှစ်ယောက်လောက်တောင် ဒီလိုဖြစ်ဖူးလို့ ကျွန်တော် တိုင်ပင်ဆွေးနွေး ကုသပေးခဲ့ ဖူးပါတယ်။ တကယ်ကို ဆိုးတဲ့ အဖြစ်ပါ။ ပြီးလို့ ပြီးမှန်းလည်း မသိ၊ သုက်သာလွှတ်သွားတယ် ကျေနပ်မှု အပေါ်တဲ့ အဖြစ်ပါပဲ)
“ဒါကြောင့် ပန်းသေပန်းညှိုး ဖြစ်လာတဲ့ အမျိုးသားတစ်ယောက်ဟာ သူ့ကိုယ်သူ ဒီမေးခွန်း ပြန်မေးသင့်ပါတယ်။ အဖော်ရဲ့ လက်၊ ပါးစပ်၊ မ အင်္ဂါ စတာတွေက ရတဲ့ လှုံ့ဆော်မှုနဲ့ မတူတဲ့ လှုံ့ဆော်မှုတွေ သုံးပြီး တစ်ကိုယ်ရည် အာသာဖြေခြင်း လုပ်မိနေလား ဆိုတဲ့ မေးခွန်းပါ” လို့ နယူးယောက်မြို့ Weill Cornell ဆေးပညာကောလိပ်ရဲ့ မျိုးဆက်ပွားဆေးပညာ၊ ဆီးလမ်းကြောင်းဗေဒနဲ့ စိတ်ရောဂါကုပညာ ဌာနတို့ရဲ့ ဆေးကုသရေးတွဲဖက်ပါမောက္ခ ဒေါက်တာ Michael A. Perelman က သတိပေးပြောကြားပါတယ်။ သူဟာ လိင်မှုရေးရာ ကုထုံးနှင့် သုတေသနအဖွဲ့အစည်း (Society for Sex Therapy and Research) ရဲ့ ဥက္ကဌလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
သူက ဆက်ပြောပါတယ်။ “ဒါကြောင့် ဒီအမျိုးသားဟာ သူ့ရဲ့ ပိုခံစားရစေတဲ့ ပိုကြိုက်တဲ့ အနေအထားတွေကို အဖော်ကို ပြောပြဖို့နဲ့ သူ တစ်ကိုယ်ရည် ဆန္ဒဖြေဖျောက်နေတဲ့ နည်းလမ်းက ရတဲ့ အာရုံခံစားချက်တွေ သူ့အဖော်ဆီကရတဲ့ ပုံစံနဲ့ တူအောင် လုပ်သင့်ပါတယ်။ ဆက်ပြီး ကြမ်းကြမ်းတမ်းတမ်း မလုပ်သင့်တော့ပါဘူး။
(၅) တစ်ကိုယ်ရည် အာသာဖြေခြင်းနှင့် ဆီးကျိတ်ကင်ဆာ ဆက်စပ်မှု
ဒီဆက်နွယ်မှုဟာ အခုအချိန်အထိ အတန်ငယ်ေ၀၀ါးနေဆဲပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ခိုင်မာသေချာတဲ့ နောက်ဆုံးပေါ် တွေ့ရှိချက်တွေကို တင်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
အရွယ်ငယ်စဉ်တုန်းက မကြာခဏ တစ်ကိုယ်ရည် အာသာဖြေခြင်း လုပ်ပေးခြင်းဟာ အသက်ကြီးချိန်မှာ ဆီးကျိတ်ကင်ဆာ ဖြစ်နိုင်စွမ်းကို လျှော့ချပေးနိုင်ကြောင်း BJU International စာစောင်မှာ သြစတြေးလျား သိပ္ပံပညာရှင်များက ၂၀၀၃ ခုနှစ် တုန်းက ရေးသားဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ၂၀၀၄ ရောက်တော့ အမေရိကန်ဆေးပညာအသင်း ဂျာနယ်မှာ ဒီလိုဆက်စပ်မှုမျိုး အကျိုးသက်ရောက်မှုမျိုး မရှိဘူးလို့ ပြန်လည် ငြင်းဆိုကြပါတယ်။
၂၀၀၄ ခုနှစ်နောက်ပိုင်းမှာတော့ တစ်ကိုယ်ရည် အာသာဖြေခြင်းဟာ ဆီးကျိတ်ကင်ဆာ (သို့)
ဆီးကျိတ်ကြီးရောဂါကို တကယ်လျှော့ချပေးနိုင်ကြောင်း ခိုင်ခိုင်မာမာ ဆက်စပ် တွေ့ရှိတဲ့ စာတမ်းတွေဘက်ကတော့ အင်အားပိုများလာနေသလိုပါပဲ။
ကျွန်တော့်ရဲ့ ဆေးပညာအမြင် နှင့် ဆွေးနွေးချက်
တစ်ကိုယ်ရည် အာသာဖြေခြင်း မလုပ်ရင် လူငယ်အများစုမှာ အရွယ်ရောက် နောက်ကျတတ်ပါတယ်။ (ဒီတစ်ချက်ကလည်း မျိုးရိုးဗီဇ၊ မိဘဂရုစိုက်မှု၊ ဥာဏ်ရည်၊ အပေါင်းအသင်း စတဲ့ များစွာသော အချက်တွေ အပေါ်တော့ မူတည်နေပါတယ်။ ကျွန်တော်က ယေဘုယျသဘော ပြောတာပါ)
ဒီလို ကလေးစိတ်မကုန်သေးတဲ့ ကောင်လေးတွေဟာ အရွယ်ရောက်ပြီးသား ကောင်လေးတွေလောက် ဆန့်ကျင်ဖက်လိင်အပေါ် အာရုံမရှိသေးတဲ့ အတွက် လူပေါ်လူဇော် ဖြစ်ချင်စိတ်နည်းကြတာ တွေ့ရပါတယ်။ ဥပမာ ကျောင်းစာအဆင့်၊ အားကစား၊ လူမှုရေးပါဝင်လိုမှု၊ ပရိသတ်အလယ် ထွက်ရဲမှု စတာတွေမှာ အားနည်းချက် ရှိတာကို တွေ့ရပါတယ်။
ဒါတွေမှာ မမြင့်လို့ စိတ်ဖိစီးမှုတွေရှိလာပြီး အပေါင်းအသင်းတွေကြားမှာ အံဝင်ခွင်ကျ မဖြစ်တော့ဘဲ ဘေးရောက်သွားတတ်ပါတယ်။ မိန်းကလေးတွေနဲ့လည်း အဆင်မပြေ၊ ယောက်ျားလေးအချင်းချင်းလည်း အကြောမတည့် ဖြစ်နေပြီး နောက်ပိုင်း သူတို့ အရွယ်ရောက်လာကြရင်တောင် ဒီအတွေ့အကြုံတွေဟာ သူတို့ဘ၀မှာ အနုတ်လက္ခဏာ သက်ရောက်မှု ရှိတာ တွေ့ရပါတယ်။ ကျွန်တော် အခုပြောတဲ့အချက် မှန် မမှန် သေချာစဉ်းစားကြည့်ရင် လူအများစုအတွက် မှန်တာတွေ့ရပါမယ်။
ဆီးကျိတ်ကြီးခြင်းဟာ ကင်ဆာမဟုတ်တဲ့ အကျိတ်အခြေအနေ တစ်ရပ် ဖြစ်ပြီး ဆီးကျိတ်ကြီးရာကနေလည်း ဆီးကျိတ်ကင်ဆာ ဖြစ်သွားတတ်ပါတယ်။ များသော အားဖြင့်တော့ ခွဲစိတ် ဆေးသွင်း ကုသရင် ပျောက်ကင်းတာမို့ အရမ်းတော့လည်း မကြောက်ကြပါနဲ့။
ကင်ဆာဆိုရင် ဆီးကျိတ်ကင်ဆာ ဖြစ်ဖြစ် ဘာကင်ဆာဖြစ်ဖြစ် အကုန်လုံးဟာ အချက်တစ်ချက်တည်း အပေါ်မှာ အခြေမခံဘဲ အချက်အများကြီးကြောင့် ဖြစ်ရသော (multi-factorial) ရောဂါအမျိုးအစား ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတော့ ဆိုလိုချင်တာက တစ်ကိုယ်ရည် အာသာဖြေခြင်းက ကာကွယ်နိုင်သည် ဖြစ်စေ ပိုဖြစ်စေနိုင်သည် ဖြစ်စေ သိပ်ပြဿနာမရှိပါဘူးလို့။ ကျန်တဲ့ အစားအသောက် အနေအထိုင်၊ ဓာတုအဆိပ်တွေ ကိုယ်ထဲဝင်ရောက်မှု၊ ဓာတ်ရောင်ခြည်သင့်မှု စတဲ့အချက်တွေကပိုအဓိကကျတာမို့ ဆီးကျိတ်ကင်ဆာ ကာကွယ်ချင်တယ်ဆိုရင် http://www.mutdfan.com/viewnews.php?id=5871 မှာဖော်ပြထားတဲ့ အစားအသောက်တွေကို ပုံမှန်စားသောက်ပေးပါ။
နေ့စဉ် အသီးအရွက်များများစား၊ အားကစားလေး အဆင်ပြေသလိုလုပ်၊ ဓာတုပစ္စည်းတွေ ပါတဲ့ ရယ်ဒီမိတ် အစာတွေ ဆိုးဆေးတွေ တတ်နိုင်သမျှ ရှောင်ကြဉ်သွားမယ်၊ ဆေးလိပ် လုံးဝမသောက်ဘူး၊ အရက်လျော့သောက်မယ်၊ အကောင်းမြင်စိတ်လေးနဲ့ နေသွားမယ်၊ ဇီဝိတဒါနတွေဖြစ်တဲ့ (တကယ်လိုအပ်သူကို ဆေးလှူခြင်း၊ သတ္တ၀ါများကို ကျွေးမွေးခြင်း၊ လွှတ်ပေးခြင်း) တွေ မှန်မှန် လုပ်ပေးသွားမယ်ဆိုရင် ဆိုရင် ဆီးကျိတ်ကင်ဆာမှု မဟုတ်ပါဘူး ဘယ်ကင်ဆာမဆို ဝေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ကင်ဆာသည် ၀ဋ်နာကံနာဆိုးတစ်မျိုး ဖြစ်သည့်အတွက် အတိတ်ကံကို ပြင်လို့ မရတော့ပေမယ့် ပစ္စုပ္ပန်ကံကို ကောင်းအောင် လုပ်ပေးသွားမယ်ဆိုရင် အတိတ်က အကုသိုလ်ဝဋ်ကျွေးတွေ အဟောသိကံ (အကျိုးပေးခွင့်မရတော့ခြင်း) ဖြစ်သွားနိုင်ပြီး မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်က အနာမဲ့သူ ရှင်ပါကူ လို နေနိုင်သွားမှာ သေချာပါတယ်လို့ ကံ ကံ၏ အကျိုးကိုပါ ဝေဖန်တင်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
ဗိုလ်ချုပ်ရုပ်ရှင် ရိုက်ကူးရန် နိုင်ငံတကာ ရုပ်ရှင်ကုမ္ပဏီများကို သာ ရွေးချယ်မည်
Posted by drmyochit Sunday, September 15, 2013, under ပြည်တွင်းသတင်းများ | No comments
လွတ်လပ်ရေးခေါင်းဆောင် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးရာတွင် ရိုက်ကူးရေးပိုင်း ကိစ္စရပ်အားလုံး အတွက် နိုင်ငံတကာ ရုပ်ရှင်ကုမ္ပဏီများနှင့် အဖွဲ့အစည်းများကိုသာ ရွေးချယ်မည် ဖြစ်ကြောင်း ဗိုလ်ချုပ်ရုပ်ရှင် ဖြစ်မြောက်ရေးအဖွဲ့မှ ပြန်ကြားရေးမှူး ဦးဇော်သက်ထွေးက The Voice သို့ ပြောကြားသည်။
လက်ရှိအချိန်တွင် ရုပ်ရှင်အတွက် ဇာတ်ညွှန်း ရေးသားမှုအပိုင်း အပြီးသတ်သွားပြီး အင်္ဂလိပ် version သို့ ပြောင်းရေးမည် ဖြစ်ကြောင်း၊ ကမ်းလှမ်းလာသော ပြည်ပကုမ္ပဏီများနှင့် ရိုက်ကူးမည့် ဒါရိုက်တာကို စက်တင်ဘာလနှင့် အောက်တိုဘာလအတွင်း ရွေးချယ်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း၊ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနှင့် ဒေါ်ခင်ကြည် နေရာအတွက် ရွေးချယ်ထားသော သရုပ်ဆောင်များသည်လည်း အင်္ဂလိပ်စာ သင်တန်းများ တက်ရောက်နေကြောင်း၊ ဦးဇော်သက်ထွေးက ဆိုသည်။
ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးပေးရန် ကမ်းလှမ်းထားသော ပြည်ပကုမ္ပဏီများ အများအပြား ရှိသော်လည်း မည်သည့်ကုမ္ပဏီ အဖွဲ့အစည်းနှင့် ရိုက်ကူးမည်ကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဥရောပ ခရီးစဉ်မှ ပြန်လည် ရောက်ရှိချိန်တွင် ဆုံးဖြတ်မည် ဖြစ်ကြောင်း၊ ရွေးချယ် ခံရသော ယင်းကုမ္ပဏီ အဖွဲ့အစည်းက ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးမှုတွင် အစအဆုံး တာဝန်ယူမည်ဖြစ်ပြီး လိုအပ်သည့် အချက်အလက် များကိုလည်း ပြန်လည် ဖြည့်စွက်ခြင်းများ ပြုလုပ်မည် ဖြစ်ကြောင်း၊ ၎င်းတို့ လက်သို့ လွှဲပြောင်းချိန်မှစ၍ နိုင်ငံတကာ နည်းများနှင့် အဆင့်အတန်း မီသော ဗိုလ်ချုပ်ရုပ်ရှင်ကို ဖန်တီးမည် ဖြစ်ကြောင်း ၎င်းကထပ်လောင်း ပြောကြားသည်။
ဗိုလ်ချုပ်ရုပ်ရှင် ဖြစ်မြောက်ရေး အဖွဲ့နှင့် ကိုရီးယားနိုင်ငံမှ ရုပ်ရှင်နှင့် ရုပ်သံထုတ်လုပ်သူ နှစ်ဦးတို့သည် ဧပြီလ၂၃ ရက်နေ့၌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နေအိမ်တွင် တွေ့ဆုံခဲ့ပြီး ဗိုလ်ချုပ်ရုပ်ရှင် ရိုက်ကူးမှုပိုင်းတွင် နည်းပညာများနှင့် ထုတ်လုပ်မှုပိုင်းတို့ကို ကူညီရန် လာရောက် ကမ်းလှမ်းခဲ့ကြသည်။
“သူတို့ဘက်ကတော့ ဒီရုပ်ရှင်ဇာတ်ကား ရိုက်ကူးတဲ့နေရာမှာ ထုတ်လုပ်မှုနဲ့ နည်းပညာပိုင်းအတွက် တတ်နိုင်သမျှ ကူညီပေးမယ် ပြောပါတယ်။ ကိုယ်တို့ဘက်ကလည်း ဇာတ်ညွှန်းပဲ ပြီးသေးပြီး ရိုက်ကူး ရေးတွေ မစရသေးဘူးဆိုတော့ ဘာလိုအပ်မယ်ဆိုတာ မသိသေးဘူးလေ။ အဲဒီတော့ လက်ရှိရုပ်ရှင်အတွက် ကိုယ်တို့ လုပ်ဆောင်ထားသမျှကို သူတို့နဲ့ ဆွေးနွေးကြတယ်။ သူတို့ နောက်တစ်ခေါက် ပြန်လာဦးမယ် ပြော တယ်” ဟု ဗိုလ်ချုပ်ရုပ်ရှင် ဖြစ်မြောက်ရေး အဖွဲ့ဝင် ဦးမင်းထင်ကိုကိုကြီးက ပြောကြားသည်။
“အရင် ဇူလိုင်လက ဂျပန်ကို သွားပြီးတော့ ဗိုလ်ချုပ်ရုပ်ရှင်အတွက် သွားလေ့လာမယ့် ကိစ္စက ဆိုင်းငံ့ထားပါတယ်။ အဖွဲ့ဝင်တွေ အားလုံး ဂျပန်ကိုသွားရင် အကုန်အကျ အရမ်းများလို့ အဖွဲ့ဝင်တွေ ဆွေးနွေးပြီး မသွားဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်တာပါ” ဟု ၎င်းက ပြောကြားသည်။
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးမှုအတွက် ဗြိတိန်၊ ပြင်သစ်နှင့် ဂျပန်နိုင်ငံတို့ကလည်း အကူအညီများ ပေးရန် ကမ်းလှမ်းထားကြောင်း၊ သမိုင်းဆိုင်ရာ အထောက်အထား ပစ္စည်းများကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြ
ည်က ဗြိတိန်နှင့် အိန္ဒိယနိုင်ငံတို့မှ အကူအညီ ယူပေးမည်ဟု ပြောကြား ထားကြောင်း၊ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနှင့် ဒေါ်ခင်ကြည် နေရာအတွက် သရုပ်ဆောင် အသစ်များကို ရွေးချယ်ထားသော်လည်း ဂဠုန်ဦးစော၊ ဦးနုနှင့် သခင်ဗဟိန်း နေရာတို့အတွက် အနုပညာ နယ်ပယ်မှ သရုပ်ဆောင်များကိုသာ ရွေးချယ်ရန် လျာထားကြောင်း၊ ဗိုလ်ချုပ် ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကို ယခုနှစ် မကုန်ခင် ရိုက်ကူးသွားမည်ဖြစ်ပြီး ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း၏ နှစ် ၁၀၀ ပြည့် မွေးနေ့ဖြစ်သော ၂၀၁၅ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီ ၁၃ ရက်မတိုင်မီ ပြသနိုင်အောင် ကြိုးစားနေကြကြောင်း ဒါရိုက်တာ မင်းထင်ကိုကိုကြီးက ဆိုသည်။
မူဆလင်များမှ ငါးနှစ်သမီးကလေးအား အုပ်စုဖွဲ့ မုဒိမ်းကျင့်
Posted by drmyochit Sunday, September 15, 2013, under နိုင်ငံတကာသတင်းများ | No comments
ပါကစ္စတန်တွင် မူဆလင်များမှ ငါးနှစ်သမီးကလေး အား အုပ်စုဖွဲ့ မုဒိမ်းကျင့်ကာ လာဟိုးရ်မြို့ရှိ ဆေးရုံတစ်ခုအနီးတွင် စွန့်ပစ်ထားခဲ့။ ကျူးလွန်ခံရသူကလေးမလေးမှာ အရေးပေါ်ခွဲစိတ်ကုသမှုခံယူ အပြီး အခြေအနေကောင်းမွန်လျက်ရှိသော်လည်း စကား မပြောနိုင်သေး။ နောက်ထက် ခွဲစိတ်မှု ၂-ခုပြုရန်ရှိ။ လုံခြုံရေးကင်မရာမှတ်တမ်းမှ တစ်ဆင့် ကူးယူခဲ့သော ခဲဆွဲပုံဖြင့် မုဒိမ်းမှုကျူးလွန်ရာတွင် ပါဝင်ခဲ့သူ ရှာဇဒ်-ကပါဒီယား ဆိုသူအား ပုလိပ်တပ်ဖွဲ့မှ ဖော်ထုတ် ဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့သည်။
နောက်ဆုံးရရှိသော သတင်းများအရ သံသယရှိသူ လေးဦးအား သောကြာနေ့က ဖမ်းဆီးမိခဲ့သောလည်း စခန်းရှိ ဒု-လက်ထောက်ရဲအုပ်မှ ပြန်လွှတ်ပေးခဲ့သည်။ ယခုအချိန်တွင် ထို ဒု-လက်ထောက်ရဲအုပ်မှာ ဝတ္တရားပျက်ကွက်မှုဖြင့် ရာထူးချထားခံရပြီး လွှတ်ပေးခဲ့သော သံသယရှိသူလေးဦးအား ပြန်လည်ဖမ်းဆီး ထိန်းသိမ်းခဲ့ပြီးဟု ဖော်ပြထားသည်။
LAHORE: Police on Saturday re-arrested four suspects allegedly involved in five-year old girl rape, who were released on Friday.
Police said that Assistant Sub-Inspector (ASI) was suspend due flawed prove and releasing the suspects after preliminary investigation.
The police have not been able to make any solid development into the barbaric incident, in whichaminor girl, daughter ofaWAPDA employee was subjected to rape after being abducted outside her house.
Doctors say although the child was physically stable, she was battlingatrauma and mental agony.
BY: ရာဇာဓိ ရာဇာ (facebook)
ဓာတုလက်နက်များကို ဆီးရီးယားနိုင်ငံတစ်ဝန်းတွင် ဖြန့်ကြက်ထား
အမေရိကန်မှ ဖြိုခွင်းလို သော ဆီးရီးယားဓာတုလက်နက် များကို ဆီးရီးယားရှိနေရာပေါင်း ၅ဝတွင် ဖြန့်ကြက်ထားခဲ့ကြောင်း Wall Street Journal တွင် ဖော် ပြခဲ့သည်။
ဆီးရီးယားဓာတုလက်နက် များကို ပြောင်းရွှေ့ရန် ဆီးရီးယား စစ်တပ်ကို တာဝန်ပေးခဲ့ကြောင်း နှင့် ထိုလက်နက်များ လုံခြုံစိတ် ချစေရန် ရုရှားမှစီစဉ်နေသည်နှင့် ပတ်သက်ပြီး မေးခွန်းများပေါ် ထွက်လာစေကြောင်း အမေရိကန်၊ အရှေ့အလယ်ပိုင်းသတင်းများ အရ ကိုးကားပြီး ဖော်ပြခဲ့သည်။
ဩဂုတ်၂၁ရက်က တိုက် ခိုက်မှုတွင် အဆိပ်ဓာတ်ငွေ့ပါဝင် မှုကြောင့် ကလေးငယ်ပေါင်း ၄၀၀ အပါအဝင် လူ၁၄၀ဝခန့် သေဆုံး ခဲ့ရသည်ဟု အမေရိကန်မှ စွပ်စွဲခဲ့ သည်။ မီဒီယာသတင်းများအရ ဆီးရီးယားစစ်တပ် Unit 450 သည် လပေါင်းများစွာက ပစ္စည်း များပြောင်းရွှေ့နေခဲ့ကြောင်း သိ ရသည်။ လွန်ခဲ့သောတစ်နှစ်ခန့် ကစပြီး သေစေနိုင်လောက်သော လက်နက်များကို ဆီးရီးယားအ နောက်ဘက်ရှိ နေရာပေါင်းများ စွာတွင် ပြောင်းရွှေ့ထားခဲ့သည်။
ဆီးရီးယားအနောက်ဘက်၊ တောင်ဘက်၊ မြောက်ဘက်နှင့် အရှေ့ဘက်တို့ရှိ နေရာပေါင်း ၅၀ တွင် လက်နက်များဖြန့်ကြက်ထား ခဲ့ကြောင်း၊ အမေရိကန်မှ သဘော ပေါက်ခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့် ဓာတု လက်နက်များ ထပ်မံဖြန့်ဝေသော် လည်း အမေရိကန်နှင့် အစ္စရေး ထောက်လှမ်းရေးများက အဆိုပါ လက်နက်တည်နေရာကို သိကြောင်း ယုံကြည်နေရဆဲဖြစ်သည်။
အမေရိကန်မှ ဂြိုဟ်တုဖြင့် ဆီးရီးယားယာဉ်များကို ခြေရာခံ ခဲ့သော်လည်း ယာဉ်ထဲတွင် မည် သည့်ပစ္စည်းပါသည်ကို မသိရပေ။ သမ္မတဘာရှားအယ်လ်အာဆတ် သည် အမေရိကန်၏တိုက်တွန်းမှု ဖြင့် ဓာတုလက်နက်အသုံးပြုမှုကို ရပ်ဆိုင်းရန် စီစဉ်နေကြောင်း ဓာတု လက်နက်ကို လုံခြုံစိတ်ချရအောင် မည်သို့စီစဉ်နေသည်ကို သံသယ ဖြစ်ခဲ့ရသည်။
၀ါရှင်တန် ၊စက်တင်ဘာ(၁၃)၊ Ref-AFP
တက်တူးထိုးထားသောအမျိုးသမီးအား အများသုံးရေချိုးခန်း ရေချိုးခွင့်ပိတ်
Posted by drmyochit Sunday, September 15, 2013, under သတင်းများ | No comments
တိုကျို ၊ စက်တင်ဘာ(၁၃) ၊ Ref-AFP
Maori မျိုးနွယ်ဝင် နယူးဇီ လန်အမျိုးသမီး Erana Te Haeata Brewerton အား မျက်နှာ တွင် ဆေးမင်ကြောင်ရုပ်ထိုးထား သောကြောင့် အများပြည်သူရေ ချိုးရာနေရာသို့ ဂျပန်မှ ဝင်ခွင့် မပေးကြောင်း သိရသည်။
သူမသည် ဂျပန်နိုင်ငံမြောက် ပိုင်း Hokkaido ရှိ Eniwa ရေ ချိုးရာနေရာသို့ တက်တူးထိုးထား သောကြောင့် ဝင်ခွင့်မရကြောင်း AFP သို့ ပြောသည်။ သူမသည် တိုင်းရင်းသားပညာရပ်ဆိုင်ရာ စည်းဝေးပွဲသို့ တက်နေသူဖြစ်ပြီး ထိုသို့ငြင်းပယ်ခံရခြင်းမှာ ယာကူဇာကဲ့သို့ မြေအောက်ဂိုဏ်း သားများဝင်ရောက်ခြင်းကို ဟန့် တားသည့်စည်းမျဉ်းနှင့် ငြိစွန်းနေ ၍ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
မျက်နှာတွင် ta moko မင် ကြောင်ထိုးခြင်းဓလေ့မှာ မည် သည့်လူမျိုး မည်သည့်ဒေသမှလာ သူဖြစ်ကြောင်း လူအများသိစေ ရန်ဖြစ်ကြောင်း၊ သူမ၏မင်ကြောင် ကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် သူမမည် သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်း သိစေသည် ဟု ရှင်းပြသည်။ ရိုးရာမင်ကြောင် ထိုးခြင်းသည် လူမှုရေးဆန့်ကျင် သည့် သဘောမျိုးမဟုတ်ကြောင်း၊ သူမ၏ ယဉ်ကျေးမှုဓလေ့တွင် ဂုဏ်သရေရှိသူများသာ ထိုးခွင့်ရှိ ကြောင်း Ainu ဘာသာရပ်သင် ကြားနေသော ကထိက Kenji Sekine က ကန့်ကွက်လိုက်သည်။
အသက်၆ဝရှိ သူမ၏နှုတ် ခမ်းနှင့် မေးစေ့တွင် ta moko ထိုး ထားကြောင်း တွေ့ရသည်။ ဂျပန် လူမျိုးအချို့သာ တက်တူးထိုးကြ ၍ အနောက်နိုင်ငံများတွင် တက် တူးထိုးခြင်း ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ဖြစ်နေသည်ကိုအံ့ဩနေကြသည်။
" ဇိမ် " ကာရာအိုကေဆိုင်အား အရွယ်မရောက် သေးသူများကို အလုပ် စေခိုင်းမှုဖြင့် အမှုဖွင့် အရေးယူဆောင်ရွက် လျက်ရှိ
မြိတ် ၊ ၁၅-၉-၂၀၁၃
တနင်္သာရီ တိုင်းဒေသကြီး ၊ မြိတ်မြို့ ၊ ကလွင်ကျေးရွာ အုပ်စု၊ တောရကျောင်း ရပ်ကွက် အဝေးပြေး ကားဝင်း အတွင်းတွင် ရှိသော " ဇိမ် "ကာရာအိုကေ ဆိုင်တွင် အရွယ် မရောက်သေးသူ အမျိုးသမီး ငယ်တစ်ဦး အား အလုပ်စေခိုင်းမှု အတွက် ကလေးသူငယ် ဥပဒေအရ ဆိုင်ရှင်အား မြိတ် လူကုန်ကူးမှု တားဆီး ကာကွယ်ရေး အဖွဲ့မှ ရဲအုပ် သက်နိုင်က စက်တင်ဘာလ ၁ဝ ရက် နံနက် ၁ဝနာရီခွဲ တွင် အမှုဖွင့် တိုင်ကြား သောကြောင့် မြိတ်မြို့မ ရဲစခန်းမှ မပတ(၂၅) အမှတ်စဉ် ၂၁၈/၂ဝ၁၃ဖြင့် အမှုဖွင့်ပြီး မြိတ်မြို့နယ် တရားရုံးသို့ တရားစွဲ တင်ပို့ခဲ့ရာ မြိတ်မြို့နယ် တရားသူကြီး ဒေါ်ဌေးဌေးဝင်း မှ ပြစ်မှုကြီး အမှတ် ၉၁၈/၂ဝ၁၃ ဖြင့် လက်ခံ စစ်ဆေးလျက် ရှိပြီး စက်တင်ဘာ ၂ဝ ရက်နေ့တွင် ရုံးတင် စစ်ဆေးရန် ချိန်းဆို ထားကြောင်း သိရသည်။
ဖြစ်စဉ်မှာ မြိတ် လူကုန်ကူးမှု တားဆီး ကာကွယ်ရေး တပ်ဖွဲ့ စိတ်မှူး ရဲအုပ်သက်နိုင် နှင့် တပ်ဖွဲ့ဝင်များ ၊ ကလွင်ကျေးရွာ အုပ်ချုပ်ရေး အဖွဲ့ဝင်များ ၊ မြို့မ ရဲစခန်းမှ တာဝန်ရှိ သူများနှင့် အတူ မြိတ်မြို့ အဝေးပြေး ကားဝင်း ပထမလမ်းရှိ ကိုညီညီစံ (ခ) သားညီ ပိုင်ဆိုင်သော " ဇိမ် " ကာရာအိုကေ ဆိုင်သို့ ဝင်ရောက် စစ်ဆေး ခဲ့ရာ အသေးလေး (ခ) မဝင်းပပ နှင့် အမျိုးသမီး ၃ ဦးအား တွေ့ရှိ၍ မြိတ်တပ်ဖွဲ့ စိတ်မှူးရုံး သို့ ခေါ်ယူ စစ်ဆေးခဲ့ရာ အသေးလေး (ခ) မဝင်းပပ သည် ရန်ကုန်မြို့နေ မနွယ် (ခ) နွဲ့နွဲ့လှိုင်၏ ပို့ဆောင် ပေး မှုဖြင့် " ဇိမ် " ကာရာအိုကေ ဆိုင်သို့ ရောက်ရှိ လာခဲ့ပြီး လစာနှင့် အချိန်ပိုင်း လုပ်ခများ ရရှိကြောင်း ၊ သီချင်း ဆို ဧည့်ခံရသော အလုပ်ကို သာလုပ်ပြီး အခြားအလုပ် နှင့် လိင်ပိုင်း ဆိုင်ရာ အဓမ္မ စေခိုင်း ခံရခြင်း မရှိသဖြင့် လူကုန်ကူးမှု ကျူးလွန် ခံရခြင်း မရှိကြောင်း စစ်ဆေး တွေ့ရှိ ရသော်လည်း အသေးလေး (ခ) မဝင်းပ ပနှင့် အတူ ပါရှိလာသော မနှင်းဆွေရီ (ခ) နှင်းနှင်း (ဘ) ဦးဝင်းဇော် ရွှေပြည်သာ မြို့နယ် နေသူသည် အသက်(၁၄) နှစ်သာ ရှိသေးသော ကလေးအရွယ် ဖြစ်သော ကြောင့် ဆိုင်ရှင်အား အမှုဖွင့် အရေးယူ ဆောင်ရွက် လျက် ရှိကြောင်း သိရှိရသည်။
အချိန်တန်လို့ သရုပ်မှန်တွေ ပေါ်လာပြီ
Posted by drmyochit Sunday, September 15, 2013, under တစ်ဆင့်ပြန်လည်ဖော်ပြ | No comments
ကျွန်တော်တို့ နေထိုင်ရာ လူ့ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုတာ တစ်နေ့တစ်မျိုး မရိုးနိုင်သော ပြဿနာပေါင်း သောင်းခြောက် ထောင်ကို မြင်တွေ့ကြားသိနေရခြင်းမှာ လူ့သဘောသဘာဝ လို့ ပြောနိုင်ပါတယ်။ တောလက်ကျေးရွာတွေမှာ ဆိုရင် လင်နဲ့မယားရန်ဖြစ်လို့ ခုနှစ်အိမ်ကြားရှစ်အိမ်ကြား ဆဲဆိုအော်ဟစ်သံတွေကြားရ၊ ဟိုဘက်ဆွေမျိုး ဒီဘက်ဆွေမျိုးပါလာပြီး အုံ့အုံ့ကြက်ကြက်ဖြစ်ကာ ဓလေ့တစ်ခုလို ဖြစ်နေပါပြီ။ ဒါပေမယ့် အချိန်တန်တော့ အဲဒီ လင်မယားနှစ်ယောက် ပြန်ပေါင်းပြီး အဆင်ပြေသွားကြတာပါပဲ။ နှစ်ဖက်ဆွေမျိုးတွေသာ မျက်နှာတွေပူပြီး မခေါ် မပြောရဲဖြစ်ကြတာပဲ အဖတ်တင်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထမရှိတဲ့ ထောင်ထွက်လူဆိုးတစ်ယောက် ရွာပြန်လာပြီး လူကောင်းအဖြစ် ဟန်ဆောင် ရင်းကနေ သရုပ်မှန်ပေါ်တတ်တဲ့ သဘောသဘာဝကိုတော့ ရွာတစ်ရွာမှာ ကြုံခဲ့ဖူးပါတယ်။ ကျွန်တော်က နယ်မြို့တစ်မြို့နဲ့ မဝေးတဲ့ ရွာတစ်ရွာမှာ ကျောင်းဆရာအဖြစ် တာဝန်ကျပါတယ်။ အဲဒီရွာမှာ တစ်ရွာလုံး အော့ကြောလန်တဲ့ လူဆိုးလူမိုက်တစ်ယောက်ရှိတယ်။ မိဘတွေက ကြေးရတက်တွေဆိုတော့ ရွာမှာ အရှိန်အ၀ါ ရှိတယ်၊ အဲဒီလူမိုက်ကလည်း မိဘမျက်နှာနဲ့ တစ်ရွာလုံး ဘယ်သူ့မှ လူထင်တာမဟုတ်ဘူး။ တစ်နေ့ အဲဒီ လူမိုက်ဟာ ရွာပြင်က ထန်းတောမှာ မူးရူးရမ်းကားပြီး လူသတ်မှုဖြစ်လို့ ထောင်ကျသွားတယ်၊ ကံကောင်းချင် တော့ လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်နဲ့ ပြန်လွတ်လာခဲ့တယ်။
အဲဒီနောက်ပိုင်း ရွာမှာ လူကြီးလူကောင်းပုံစံနဲ့ ပြောင်းလဲသွားခဲ့တယ်။ တစ်ရွာလုံး အံ့အားသင့်ကုန်ကြတာပေါ့။ အဖေဆုံးသွားတော့ အမေကပဲ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကို ဆက်လုပ်ရင်း ထောင်ထွက်သားကို နေရာပေးတယ်။ ရွာအတွက် အလှူအတန်းတွေလုပ်ပြီး လိုအပ်တာမှန်သမျှ အကုန်လုပ်ပေးရာကနေ ရွာမှာ မျက်နှာပွင့် ဂုဏ်တက်ပြီး သားထောင်ထွက်ကိုလည်း ရွာက လက်ခံလာကြတယ်။ သူ့ကို အမေလုပ်သူက လူဝင်ဆန့်အောင် ရယ်ဆိုပြီး ရွာက လူမှုရေးအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ထဲမှာ နေရာတစ်နေရာရအောင် လုပ်ပေးခဲ့တယ်။ အမေ့မျက်နှာနဲ့ တစ်ရွာလုံးက သူ့ကို ယုံကြည်ပြီး အဲဒီအဖွဲ့ထဲမှာ ငွေထိန်းတာဝန်ပေးလိုက်တယ်။
လအနည်းငယ်ကြာလာတော့ ငွေအလွဲသုံးစားမှုပေါ်လာလို့ စစ်ဆေးလိုက်ရာမှာ အဲဒီလူက ရံပုံငွေတွေကို ချဲထိုး၊ ဘောလုံးပွဲတွေ လောင်းပစ်လိုက်တာ ကုန်ပါလေရော၊ အမေလုပ်သူက သူ့မျက်နှာအိုးမဲသုတ်ရပါ့မလားဆိုပြီး သားဖြစ်သူကို အပြစ်တင်တာပေါ့၊ အဲဒီငွေတွေကိုလည်း ပြန်လျော်ပေးမယ်ပေါ့။ ဒါပေမယ့် ရွာကတော့ သူ့ကို အဲဒီအဖွဲ့ထဲကနေ ထုတ်လိုက်ပါတယ်။ အမေလုပ်သူရဲ့ ရွာအပေါ်ကောင်းခဲ့သမျှဟာလည်း သဲထဲရေသွန်သလို ဖြစ်ပြီး ရွာရဲ့ယုံကြည်မှုကို မရတော့ပါဘူး။ ဆိုလိုချင်တာက လူဆိုးလူမိုက်ဆိုတာ ဘယ်လောက်ပဲ လူကောင်း ယောင်ဆောင်ပြီး လိမ္မာပါတယ် လို့ပြောပြော အချိန်တန်ရင် သရုပ်မှန်ကပေါ်လာတတ်တာ သင်ခန်းစာယူစရာ ဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒီရွာလေးကနေ ကျွန်တော် ၂၀၁၀ ခုနှစ်ရောက်တော့ ခွဲခွာခဲ့ရပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံအလယ်ပိုင်းက မြို့တစ်မြို့ က အထက်တန်းကျောင်းကို အထက်တန်းပြအဖြစ် ပြောင်းရွှေ့ရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ အဖြစ်အပျက်လေး တစ်ခု ဒီမြို့မှာ ထပ်ကြုံရပြန်ပါတယ်။ ကျွန်တော်က ကျောင်းဆရာဖြစ်နေတော့ နိုင်ငံရေးတွေ စိတ်မ၀င်စားသလို ဘယ်ပါတီအဖွဲ့အစည်း၊ ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမှလည်း အစွဲမထားတတ်ပါဘူး။ ကျွန်တော်ပြောချင်တာက လူ့သဘော သဘာဝကိုပဲ သင်ခန်းစာယူစေချင်တဲ့ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ မျှဝေပေးခြင်းသာ ဖြစ်ပါတယ်။
မြို့သူမြို့သားအားလုံးနီးပါးက ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ယောက်ကို ယုံကြည်ထောက်ခံလိုက်လို့ မြို့နယ်ပါတီတစ်ခုရဲ့ လွှတ်တော်အမတ်ရာထူးထိ ရခဲ့ပါတယ်။ မြို့နယ်အတွက် ဘာတွေ ဆောင်ရွက်ပေးမယ်ဆိုပြီး အာပေါင်အာရင်း သန်သန်နဲ့ ပြောသွားတဲ့ စကားတွေမှာ မြို့သူမြို့သားတွေ နစ်မျောခဲ့ကြတယ်။ ဟော. အခု နေရာလည်းရရော ကိုယ့်မြို့သူမြို့သားတွေကို စော်ကားလိုက်ပြီ၊ ဒီတော့ မြို့သူမြို့သားတွေ ဆွေ့ဆွေ့ခုန်နေကြပြီလေ၊ အဲဒီ ရာထူးနဲ့ မထိုက်တန်ပါဘူး၊ ရုပ်သိမ်းပေးဖို့ တောင်းဆိုမယ်ဆိုပြီး လက်မှတ်တွေ လိုက်ထိုးနေတာ ကျွန်တော် တွေ့နေရပါတယ်။ မြို့သူမြို့သားတွေက ပင့်ပေးလိုက်လို့ အမြင့်ရောက်သွားကာမှ အောက်ကို တံတွေး ထွေးတတ်တဲ့အကျင့် ဒါမှမဟုတ် စော်ကားမောက်မာတဲ့ အကျင့်မျိုးရှိတဲ့ လူဖျက်ဟာ အချိန်တန်တော့လည်း သရုပ်မှန်တွေ ပေါ်လာတယ်လို့ ဆိုရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
တိုက်ဆိုင်စွာပဲ ကျွန်တော်တို့ ကျောင်းနားက လက်ဖက်ရည်ဆိုင်မှာ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ရက်လောက်ကတည်းက သတင်းထွက်နေတာ ကြားရပြန်ပါတယ်။ ဂျာနယ် တစ်စောင်အတွက် သိန်း ၁၈၀၀ အလွဲသုံးစားမှုဖြစ်နေလို့ အဖွဲ့ဝင်တွေ အချင်းချင်း တစ်ယောက်အပေါ် တစ်ယောက် အပြစ်ဖို့နေကြပြီး အဲဒီပါတီအပေါ် ပြည်သူရဲ့ ယုံကြည်မှုတွေလည်း လျော့သွားပြီလို့ အသံတွေ ထွက်နေပါတယ်။ အဲဒီသတင်းမှန်ခဲ့ရင် အဖွဲ့အစည်းရဲ့ ကိုယ်စား ယုံကြည်လို့ တာဝန်ပေးအပ်တာကို နေရာနဲ့ လုပ်ပိုင်ခွင့်ရရင် အလွဲသုံးစားလုပ်တတ်တဲ့ သရုပ်မှန်ပေါ် လာတယ်လို့ ပြောနိုင်ပါတယ်။
ကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ စကားတွေဟာ အပြုသဘောသက်သက်ပါ။ ဘယ်သူတစ်ဦးတစ်ယောက် ဘယ်အဖွဲ့အစည်းကိုမှ ပုတ်ခတ်ဝေဖန်စော်ကားခြင်း ဆန္ဒလုံးဝမရှိပါ။ ကျွန်တော်တို့က ကြားနေလူတန်းစား အစိုးရကျောင်းဆရာ တစ်ဦးသာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကိုယ့်နိုင်ငံကောင်းစားတာကိုတော့ မြင်ချင်တွေ့ချင် ပါတယ်။ ဒီတော့ ပြောင်းလဲလာတဲ့ ဒီနေ့ခေတ်မှာ နိုင်ငံကိုကောင်းအောင် လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေ၊ အဖွဲ့အစည်းတွေ အများကြီး လိုအပ်နေပါပြီလို့ မြင်မိပါတယ်။ အများစု အထင်ကြီးနေတဲ့ လူပုဂ္ဂိုလ်တွေ အဖွဲ့အစည်းတွေ ဆိုတာကလည်း အချိန်တန်တော့ သရုပ်မှန်တွေ ပေါ်လာတတ်တာ တွေ့ရပါတယ်။ ဒါဆိုရင် အများပြောနေတဲ့ ၂၀၁၅ ခုနှစ်အတွက် ဘယ်သူ၊ ဘယ်အဖွဲ့အစည်းတွေ တာဝန်ယူနိုင်မလဲဆိုတဲ့ အဖြေဟာ လည်း အင်မတန်အရေးကြီးလာပါပြီ။ နေရာနဲ့ လုပ်ပိုင်ခွင့်ရရင် တိုင်းပြည်ကိုတောင် ရောင်းစားမယ့် လူတွေ လက်ထဲ မှာတော့ ကျွန်တော်တို့တွေရဲ့ အနာဂတ်ကို ၀ ကွက် မအပ်ချင်တာအမှန်ပါ။
အချိန်တန်လို့ သရုပ်မှန်တွေ ပေါ်လာပြီ… အထက်မှာပြောခဲ့သလို ထောင်ထွက် လူမိုက်ကို ငွေထိန်း ထားမိ လို့ အလွဲသုံးစားဖြစ်တာက ငွေလျော်ခိုင်းပြီး အဖွဲ့ထဲက ထုတ်ပစ်လို့ရတယ်၊ ရွာလည်း မနစ်နာပါ၊ ကောင်းမယ် ထင်လို့ အများက ၀ိုင်းပြီး ထောက်ခံပေးခဲ့တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ကို မကျေနပ်လို့ ရာထူးတွေ ပြန် ရုပ်သိမ်းပေး ပါလို့ တောင်းဆိုတာကလည်း အဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ပဲ နစ်နာရုံကလွဲပြီး မြို့နယ်တစ်ခုလုံး မနစ်နာနိုင်ပါ၊ ဒါပေ မယ့် နိုင်ငံ တစ်ခုလုံးကို အကျင့်စာရိတ္တမကောင်းတဲ့ အဖွဲ့အစည်းတွေ လက်ထဲမှာ ယုံယုံကြည်ကြည် အပ်မိ လို့ မှားသွား ရင်တော့ တိုင်းသူပြည်သားအားလုံးအတွက် နစ်နာဆုံးရှုံးမှုကြီးမားပြီး ဘ၀ပါ ပျက်ရမှာပါ၊ ဒီတော့ ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်၊ ဘယ်အဖွဲ့အစည်းကို အားကိုးယုံကြည်ရမလဲဆိုတဲ့ အဖြေကို ကိုယ်တိုင်အသိတရား ကိုယ်စီနဲ့ လေးလေးနက်နက် စဉ်းစားပြီး ဆုံးဖြတ်ဖို့ လိုအပ်နေပြီဖြစ်ကြောင်း အကြံပြုလိုက်ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
လူကုန်ကူးမှု ပုံစံများ ပြောင်းလဲ ကျူးလွန်လာ၊ ကျူးလွန်သူအများစုက အမျိုးသမီးများဖြစ်နေ
မြန်မာနိုင်ငံတွင်ဖြစ်ပွားနေသော လူကုန်ကူးမှုပုံစံများ ပြောင်းလဲလာသည်ကိုတွေ့ရှိရပြီး လူကုန်ကူးမှု များကို ကျူးလွန်နေသူများအများစုမှာ အမျိုးသမီးများဖြစ်ကြပြီးစုစုပေါင်း ၆၅ % ထိရှိနေကြောင်း သိရှိရသည်။
ထိုကြောင့် လူကုန်ကူးမှု ကာကွယ်တားဆီးရေး ဒုတိယ ငါးနှစ်စီမံကိန်း အတွက်ကာကွယ်တာဆီးရေး ဆိုင်ရာနည်း ဗျူဟာ များ ချမှတ်အကောင်အထည်ဖော်လျှက်ရှိသည်ဟု လူကုန်ကူးမှု ကာကွယ်တား ဆီးရေး အဖွဲ့ ဥက္ကဌ ကရင်ပြည်နယ်အစိုးရအတွင်းရေးမှုးဦးမျိုးအောင်ဌေးက ပြောသည်။
စက်တင်ဘာလ ၁၃ ရက် ကရင်ပြည်နယ် ဖားအံမြို့ ဇွဲကပင်ခန်းမ ၌ပြုလုပ်သော လူကုန်ကူးမှု တိုက်ဖြတ်ရေးနေ့ တွင် ယခုလိုပြောကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
"မိမိတို့ဒေသအတွင်းမှာရှိတဲ့ လူကုန်ကူးမှုပုံစံတွေကပြောင်းလဲတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒုတိယ ငါးနှစ်စီမံ ကိန်းနဲ့ ကာကွယ်တာဆီးရေး နည်းဗျူဟာများ ချမှတ် အကောင်အထည်ဖော်ဖို့ ရှိပါတယ်။" ဟုကရင်ပြည်နယ်အစိုးရအတွင်းရေးမှုး ဦးမျိုးအောင်ဌေးက ပြောသည်။
ထို့အပြင် မြန်မာနိုင်ငံရှိမြို့ပေါင်း ၃၃၀ ရှိသည့်အနက် ၁၁၉ မြို့နယ်တွင်လူကုန်ကူးမှု များဖြစ်ပွား လျှက်ရှိနေပြီး ရန်ကုန်၊ ရှမ်းပြည်နယ်(မြောက်ပိုင်း)၊ အရှေ့ပိုင်း ၊ ပဲခူးတိုင်း၊ မန္တလေးတိုင်း၊ မွန်ပြည်နယ်၊ ကချင်ပြည်နယ်နှင့် တနင်္သာရီတိုင်းတို့မှာ အများဆုံးဖြစ်ပွားနေကြောင်းသိရသည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် လူကုန်ကူးမှုကာကွယ်တားဆီးရေးဥပဒေကို ၂၀၀၅ စက်တင်ဘာလတွင်ပြဌာန်းခဲ့ပြီး ၂၀၀၆ ခုနှစ်၌ ပြည်နယ်နှင့်တိုင်းအလိုက်လူကုန်ကူးမှုဆိုင်ရာ ကာကွယ်တားဆီးရေးအဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်း၍ ၅ နှစ်စီမံကိန်းရေးဆွဲကာ လုပ်ငန်းစဉ်များကို အကောင်းအထည်ဖော်ခဲ့ကြောင်း
"ကရင်ပြည်နယ်အနေနဲ့ ၂၀၀၆ ခုနှစ် ဇန်န၀ါရီလက စပြီး အမျိုးသား ၁၁၆ ဦးအမျိုးသမီး ၂၈၈ဦး ကလေး ၂၄ ဦး စုစုပေါင်း ၄၂၈ ဦး တို့ကို ပြန်လည်လက်ခံခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ လူကုန်ကူးမှုနဲ့ပတ်သတ်ပြီး ၂၀၀၆ ခုနှစ် ကနေ
အခုချိန်ထိ လူကုန်ကူးမှု ၂၄ မှု ၊ လူမှောင်ခိုမှု ၅၈ မှု၊ ပြည်ပအလုပ်အကိုင်ရှာဖွေရေးဥပဒေနဲ့ ၇ မှု တို့နဲ့ လူပေါင်း ၁၆၃ ဦးကိုအရေးယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။" ဟု ကရင်ပြည်နယ် ၀န်ကြီးချုပ် ဦးဇော်မင်းကပြောသည်။
လူကုန်ကူးခြင်းခံရသူ အမျိုးသား ၁၈၃ ဦးနှင့် အမျိုးသမီး ၁၆၉ ဦးတို့အားလူကုန်ကူးသူများလက်မှ တာဝန်ရှိသူများက ကယ်တင်စောင့်ရှောက်နိုင်ခဲ့သည်ဟု၎င်းကဆက်၍ ပြောသည်။
"၂၀၀၅ လူကုန်ကူးမှု ကာကွယ်တားဆီးရေး ဥပဒေအရ မည်သူကိုမဆို အခန်း ၉ ပုဒ်မ၂၄ ကနေ့ ၃၃ ထိပြဌာန်းထား ပါတယ်။ ကျူးလွန်နေသူတွေကို အနည်းဆုံး ထောင်ဒဏ် ၁၀ နှစ်ကနေ တစ်သက်တစ်ကျွန်းထိ ထောင်ဒဏ်အပြင် ငွေဒဏ်ကိုပါ ချမှတ်လို့ရပါတယ်။" ဟု ဥပဒေချုပ်ရုံး ဒု-ညွန်ကြားရေးမှူး ဦးဌေးအောင်က ပြောသည်။
၂၀၀၄ ခုနှစ်တွင် မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ ကုလသမဂ္ဂလူကုန်ကူးမှုတိုက်ဖြတ်ရေးဆိုင်ရာ ကွန်ဗန်းရှင်း
ကမ္ဘာပေါ်တွင် လူပေါင်း ၂၆ သန်းကျော် ခေတ်သစ်ကျေးကျွန်ဘ၀ရောက်ရှိနေရပြီးနှစ်စဉ် လူပေါင်း ၁.၅ သန်းကျော်နှင့် အာရှတိုက်အတွင်း၌ လူပေါင်း ၉သန်းကျော်တို့မှာ လူကုန်ကူးခြင်းခံနေရသည်ဟု ကုလသမဂ္ဂလူကုန်ကူးမှုတိုက်ဖြတ်ရေး ဒေသဆိုင်ရာရုံး၏ ထုတ်ပြန်ချက်များအရ သိရသည်။
အာဏာရှင်၏ နောက်ဆုံးနေ့ရက်များ ပြတိုက်
ရိုမေးနီးယားကို ကွန်မြူနစ်စနစ် ကျင့်သုံးပြီး အာဏာရှင်အဖြစ် အုပ်ချုပ်ခဲ့သော နီကိုလေး ကူအာဆက်စ်ကူနှင့် ဇနီးဖြစ်သူ အီလီနာတို့ကို လွန်ခဲ့သည့် နှစ်ပေါင်း (၂၀)ကျော်က အစုလိုက် အပြုံလိုက် သတ်ဖြတ်မှုများဖြင့် စွဲချက်တင် သေဒဏ်ပေးခဲ့
ရက်များ မှတ်တမ်း ပြတိုက် တစ်ခုကို ရိုမေးနီးယားနိုင်ငံတွင် ပထမဆုံးအကြိမ် ဖွင့်လှစ် ပြသသွားမည်ဟု သိရသည်။ ရိုမေးနီးယားကို ကွန်မြူနစ်စနစ် ကျင့်သုံးပြီး အာဏာရှင်အဖြစ် အုပ်ချုပ်ခဲ့သော နီကိုလေး ကူအာဆက်စ်ကူနှင့် ဇနီးဖြစ်သူ အီလီနာတို့ကို လွန်ခဲ့သည့် နှစ်ပေါင်း (၂၀)ကျော်က အစုလိုက် အပြုံလိုက် သတ်ဖြတ်မှုများဖြင့် စွဲချက်တင် သေဒဏ်ပေးခဲ့ပြီး ယခုအခါ ၎င်းအာဏာရှင်နှင့် ဆက်နွယ်သည့် ပြတိုက်ကို ဖွင့်လှစ်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ အထူးသဖြင့် ယင်းပြတိုက်တွင် နီကိုလေးတို့ ဇနီးမောင်နှံ သေဆုံးခါနီး နောက်ဆုံး (၂)ရက်တာ အတောအတွင်း ရှင်သန်နေထိုင် ဖြတ်သန်းမှု မှတ်တမ်းများကို စုဆောင်း ပြသထားသည်။
ဒီမိုကရေစီ လိုလားသော အုံကြွမှုများနှင့်အတူ ဘဝအဆုံးသတ်ခဲ့သည့် နီကိုလေး၏ နောက်ဆုံးနေ့ရက်များ ပြတိုက်မှာ တာဂိုဗစ္စတာရှိ စစ်ဘက် အဆောက်အအုံဟောင်း တစ်နေရာတွင် ထားရှိခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ တာဂိုဗစ္စတာသည် မြို့တော် ဘူခါရက်စ်မှ အနောက်မြောက်ဘက် မိုင်(၅၀)မျှ အကွာတွင် တည်ရှိသော မြို့လည်း ဖြစ်သည်။ ပြတိုက်ပြုလုပ်ထားသည့် စစ်ဘက် အဆောက်အအုံတွင် တစ်ချိန်က နီကိုလေးတို့ ဇနီးမောင်နှံကို ရုံးတင်စစ်ဆေးကာ သေဒဏ်ပေးခဲ့သည်။ နီကိုလေးသည် ရိုမေးနီးယားကို (၂၅)နှစ်နီးပါးမျှ သံမဏိ စည်းမျဉ်းများဖြင့် တစ်သွေး၊ တစ်သံ၊ တစ်မိန့် အုပ်ချုပ်ခဲ့သူ ဖြစ်သည်။
ပြတိုက်သို့ သွားရောက် ကြည့်ရှုသူများသည် နီကိုလေးတို့ ဇနီးမောင်နှံ နောက်ဆုံး အသုံးပြု စားသောက်ခဲ့သည့် သံမဏိ ပန်းကန်ပြားများကို တွေ့မြင်နိုင်မည် ဖြစ်သလို ၎င်းတို့နှစ်ဦး အိပ်စက်ခဲ့သည့် ကုတင်များကိုလည်း လေ့လာခွင့် ရှိမည်ဟု ဆိုသည်။ ထို့အပြင် တက်သုတ်ရိုက် ဖွဲ့စည်းထားသည့် တရားစီရင်ရာ အခန်းငယ်လေးကိုလည်း ထိုစဉ်က ပုံစံအတိုင်း အပြောင်းအလဲမရှိ ထိန်းသိမ်းထားသည်ကို တွေ့ရှိနိုင်မည်ဟု သိရသည်။ အဆိုပါ တရားစီရင်ရာ နေရာလေးတွင်ပင် (၁၉၈၉)ခုနှစ်၊ ခရစ္စမတ်နေ့တွင် နီကိုလေးတို့ ဇနီးမောင်နှံကို သေနတ်ဖြင့် ပတ်သတ်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ သေဒဏ်စီရင်သည့် နေရာကို မှန်အကာအရံများဖြင့် ထားရှိ ပြသထားသည်။
အင်္ဂါနေ့က ရိုမေးနီးယား စစ်တပ်မှ ဗိုလ်ချုပ် အန်ဒရီ ကီမန်ဆီက သတင်းထောက်များကို ဦးဆောင်ကာ ပြတိုက်အတွင်း လှည့်ပတ် ရှင်းလင်း ပြသခဲ့သည်။ အန်ဒရီသည် ထိုစဉ်က မြို့စောင့်တပ်မှူးအဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်နေခဲ့သူလည်း ဖြစ်သည်။ "သူ့ရဲ့ နောက်ဆုံးနေ့တွေမှာ နီကိုလေးက စားစရာ ပေါင်မုန့်ညိုနဲ့ သကြားလုံးလောက်ပဲ ပေးလို့ဆိုပြီး မကျေမနပ် ဖြစ်ခဲ့သေးတယ်"ဟု ဗိုလ်ချုပ် အန်ဒရီက အမှတ်တရ ဆိုသည်။ နီကိုလေးသည် အဝတ်အစား လဲပေးရန် တောင်းဆိုခဲ့သေးသလို စစ်တန်းလျား ကင်တင်းတစ်ခုတွင် အသုံးပြုရန် မိမိထံမှ ပိုက်ဆံ ချေးဖူးကြောင်းလည်း အင်ဒရီက ဆက်လက် ပြောကြားခဲ့သည်။
(၁၉၈၉)ခုနှစ်က နီကိုလေး၏ သစ္စာတော်ခံ ရိုမေးနီးယား စစ်တပ်သည် ကွန်မြူနစ်စနစ်ကို ဆန့်ကျင်ပြီး ဒီမိုကရေစီ စနစ်ကို လိုလားသော ဆန္ဒပြသူ (၁၁၀၀)ကျော်ကို ပစ်သတ်ခဲ့သည်။ ယင်းတို့အနက် အများစုသည် လက်နက်မဲ့ အရပ်သားများ ဖြစ်သည်။ ထိုနှစ်၏ ဒီဇင်ဘာ (၂၂)ရက်နေ့တွင် နီကိုလေးသည် အခြေအနေ ဆိုးရွားလာသည့် ဘူခါရက်စ် မြို့တော်ကို ရဟတ်ယာဉ် တစ်စင်းဖြင့် စွန့်ခွာ ထွက်ပြေးခဲ့သည်။ ၎င်းအလွန် အားထားရသည့် ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး ဗာဆီလီ မီလီရာသည် မိမိကိုယ်ကိုယ် အဆုံးစီရင်လိုက်ပြီးနောက် ရဟတ်ယာဉ် ပိုင်းလော့နှင့် ၎င်း၏ လူယုံများကပါ စွန့်ပစ်ခဲ့သည့် အခြေအနေကို နီကိုလေးတို့ ဇနီးမောင်နှံ ကြုံတွေ့ခဲ့ရသည်။
ထို့နောက် ၎င်းတို့နှစ်ဦး ခြေလျင် ထွက်ပြေးခဲ့ပြီး တာဂိုဗစ္စတာတွင် ရဲတပ်ဖွဲ့၏ ဖမ်းဆီးခြင်းကို ခံခဲ့ရပြီး ယင်းမြို့လေးတွင်ပင် တရားရုံးဖွဲ့ စစ်ဆေးမှုကို ကြုံခဲ့ရသည်။ စစ်ဆေးမှုသည် (၂)နာရီသာ ကြာမြင့်ခဲ့ပြီး စီရင်ချက် ချမှတ်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ ထိုစဉ်က နီကိုလေးဘက်မှ လျှောက်လှဲသည့် ဥပဒေ အကျိုးဆောင်များက မိမိတို့သည် ပြင်ဆင်ချိန် လုံးဝ မရှိကြောင်း ပြောကြားခဲ့သလို တရားခွင်သို့ သက်သေအဖြစ် ရောက်ရှိလာသည့် နီကိုလေး၏ လူယုံဟောင်းများကို သစ္စာဖောက်များဟု စွပ်စွဲခဲ့ဖူးသည်။ ထို့နောက် တရားရုံး စီရင်ချက်အတိုင်း ထိုအဆောက်အအုံ ခြံဝင်းအတွင်းတွင်ပင် နီကိုလေးတို့ ဇနီးမောင်နှံကို သေနတ်ဖြင့် ပစ်သတ်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ ပြတိုက်ကို ယခုလ နှောင်းပိုင်းတွင် အများပြည်သူများအတွက် စတင်ဖွင့်လှစ်ပေးသွားမည် ဖြစ်ပြီး ဝင်ကြေးကို (၇)လိုင် [၂.၁ ဒေါ်လာ] သတ်မှတ်ကောက်ခံသွားမည်ဟု သိရှိရသည်။
မော်ဒယ်ချယ်ရီမောင် ရဲ့ ဖလန်းဖလန်းထနေတဲ့ဓာတ်ပုံတွေ
Posted by drmyochit Sunday, September 15, 2013, under ဓါတ်ပုံ Album | No comments
ကိုယ်စားပြုနိုင်ငံက အသိအမှတ်မပြုသည့် မယ်ကမ္ဘာပြိုင်ပွဲဝင် အလှမယ်
Posted by drmyochit Sunday, September 15, 2013, under နိုင်ငံတကာအနုပညာ | No comments
မယ်ကမ္ဘာ ပြိုင်ပွဲတွင် ဂါနီဗာ ဝင်ရောက် ယှဉ်ပြိုင်သော်လည်း သူမသည် နိုင်ငံကို ကိုယ်စားမပြုကြောင်း ဥဇဘက် အစိုးရက ကြေညာသည်။
မယ်ကမ္ဘာပြိုင်ပွဲတွင် ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခွင့် ရရှိသူတစ်ဦးသည် ကိုယ်စားပြုနိုင်ငံအတွက် ကိုယ်စားပြုလာသည့် အလှဆုံး၊ အထက်မြက်ဆုံး ဂုဏ်ယူစရာ မိန်းကလေးတစ်ယောက်အဖြစ် လူတိုင်း အသိအမှတ်ပြုကြမည်သာဖြစ်သည်။ သို့သော်လည်း အင်ဒိုနီးရှား နိုင်ငံတွင် လက်ရှိ ကျင်းပနေသည့် မယ်ကမ္ဘာ ပြိုင်ပွဲတွင် ဥဇဘက်ကစ္စတန်အတွက် ကိုယ်စားပြု ယှဉ်ပြိုင်နေသည့် ရက်ခ်ဟီမာ ဂါနီဗာအတွက်မူ ယင်းကဲ့သို့ မော်ကြွားစရာ အခြေအနေမျိုးနှင့် အကျုံးဝင်ခွင့် ရမည်မဟုတ်ချေ။ အသက်(၁၈)နှစ်သာ ရှိသေးသည့် တက်ရ်ှကန့် ဒေသဖွား မိန်းမချောလေးသည် ယခုနှစ် ပြိုင်ပွဲတွင် ဥဇဘက် ကိုယ်စားပြု ပထမဆုံး အလှမယ်အဖြစ် မယ်ကမ္ဘာပြိုင်ပွဲတွင် ပါဝင် ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့သည်။ သူမသည် အခြား ကမ္ဘာ့နိုင်ငံ (၁၃၀)မှ အလှမယ်များနှင့်အတူ စိတ်လှုပ်ရှားစွာ ပြိုင်ပွဲ ဝင်နေခြင်း ဖြစ်သည်။ အစပိုင်းတွင် ဂါနီဗာအတွက် အရာရာ အဆင်ပြေနေခဲ့သလို သူမ၏ အရည်အသွေးကောင်းများကိုလည်း ထုတ်ပြနိုင်ခဲ့သည်။ ဂါနီဗာသည် အင်္ဂလိပ်စကားကို ရေလည်ချောမွတ်စွာ ပြောနိုင်သည်။ တင်းနစ်ကစားသည်။ စန္ဒရား တီးတတ်သည်။ ထို့အပြင် ဥဇဘက် သမ္မတ၏ သမီးဖြစ်သူ အချောအလှလေး ဂူလ်နာရာ ကာရီမိုဗာနှင့်ပင် ဆင်တူကြောင်း ချီးကျူးခံရသည်။
အဆိုပါ အခြေအနေများသည် လက်ရှိတွင်မူ စိတ်အနှောင့်အယှက် ဖြစ်စရာ အနေအထားသို့ ကူးပြောင်းသွားသည်။ မယ်ကမ္ဘာ ပြိုင်ပွဲတွင် ဂါနီဗာ ဝင်ရောက် ယှဉ်ပြိုင်သော်လည်း သူမသည် နိုင်ငံကို ကိုယ်စားမပြုကြောင်း ဥဇဘက် အစိုးရက ကြေညာသည်။ ဥဇဘက် ယဉ်ကျေးမှု ဝန်ကြီးဌာန၊ အားကစား ဝန်ကြီးဌာနနှင့် ဥဇဘက် အမျိုးသမီးများ ကော်မတီတို့က ဂါနီဗာကို ဥဇဘက် ကိုယ်စားပြု အလှမယ်အဖြစ် မိမိတို့ အသိအမှတ် လုံးဝမပြုကြောင်း အသီးသီး ကြေညာချက် ထုတ်ပြန်ခဲ့ကြသည်။ ထို့အပြင် ဂါနီဗာသည် နိုင်ငံအတွင်းတွင် အလှမယ် ရွေးချယ်မှု အဆင့်ဆင့်ကို ဖြတ်သန်း ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ခြင်း မရှိဟုလည်း ဆိုသည်။
"ဂါနီဗာဟာ ဘယ်တုန်းကမှ ဥဇဘက်ရဲ့ အထူးပြု အလှမယ် ရွေးချယ်ပွဲ တစ်ခုခုကနေ အောင်မြင် ဗိုလ်စွဲခဲ့တာ မရှိပါဘူး"ဟု တက်ရ်ှကန့် အခြေစိုက် Pro Models မော်ဒယ်လ် အေဂျင်စီကမှ ကိုယ်စားလှယ် ဇက်ဗ်လွန် ကိုမိုလော့ဗ်က ပြောကြားခဲ့သည်။ "တကယ်လို့သာ မယ်ကမ္ဘာ ပြိုင်ပွဲအတွက် နိုင်ငံမှာ လူရွေးမယ်ဆိုရင် ကျွန်တော် သေချာပေါက် ပြောရဲတာက ဂါနီဗာထက် ပိုချောပိုလှတဲ့ မော်ဒယ်လ် မိန်းကလေးတွေ အများကြီး ရွေးနိုင်ပါတယ်။ ဂါနီဗာဟာ သူ့ရဲ့ မော်ဒယ်လ်အလုပ်ကို လိမ်ညာမှု တစ်ခုနဲ့ တည်ဆောက်နေတာကတော့ စိတ်မကောင်းစရာပဲ"ဟု စွပ်စွဲခဲ့သည်။ မယ်ကမ္ဘာ ပြိုင်ပွဲကျင်းပရေး ကော်မတီကမူ အဆိုပါ ကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ တစ်စုံတစ်ရာ မှတ်ချက်ပေးမှု မရှိသေးချေ။
လတ်တလောတွင်မူ ဂါနီဗာ၏ အနေအထားသည် ဥဇဘက် နိုင်ငံအတွင်း အင်တာနက် သုံးစွဲသူ လူငယ် လူရွယ်များကြား၌ ကြီးကြီးမားမား အငြင်းပွားစရာ ဖြစ်နေခဲ့သည်။ ဂါနီဗာကို ဝေဖန်ပြစ်တင်သူများ ရှိသလို သူမကို ကြိုဆိုထောက်ခံ အားပေးသူ အများအပြားလည်း ရှိနေကြောင်း သတင်းများက ဆိုသည်။ ဂါနီဗာသည် တက်ရ်ှကန့်ရှိ ကမ္ဘာ့စီးပွားရေးနှင့် သံတမန်ရေးရာ တက္ကသိုလ်တွင် ကျောင်းစတက်ရန် စီစဉ်ထားကြောင်း ပြောဆိုသူများလည်း ရှိနေသည်။ မယ်ကမ္ဘာပြိုင်ပွဲ ကျင်းပရေး တာဝန်ရှိသူများ အနေဖြင့် ဂါနီဗာကို တရားဝင် ပြိုင်ပွဲဝင်အဖြစ် သတ်မှတ်နိုင်ခြင်း ရှိမရှိ ဝေခွဲမရ ဖြစ်နေဟန်တူကြောင်း ဝေဖန်မှုများလည်း ထွက်ပေါ်လျှက် ရှိသည်။ (၆၃)ကြိမ်မြောက် မယ်ကမ္ဘာ ပြိုင်ပွဲတွင် ကိုဆိုဗို၊ ကင်မရွန်း၊ ဂီနီရာ၊ ဂီနီရာဘစ်ဆူ နိုင်ငံများနည်းတူ ဥဇဘက်သည်လည်း ပထမဆုံးအကြိမ် အလှမယ်တစ်ဦး စေလွှတ်ပါဝင်ခြင်းဟု မယ်ကမ္ဘာ ပြိုင်ပွဲကျင်းပရေး ကော်မတီက ကြေညာထားခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။
Posted by drmyochit Sunday, September 15, 2013, under ဆောင်းပါး | 1 comment
ဒီကနေ့ မြန်မာ့နိုင်ငံရေးလောကမှာ ခေတ်စားလာတာကတော့ သူပုန်တွေရဲ့အခန်းကဏ္ဍပဲဖြစ်နေပါတယ်။ သူပုန်ဆိုတာဒီကနေ့မှပေါ်ပေါက်လာတာမဟုတ်ပါဘူး။ ပြောရယင်မြန်မာပြည်မှာ တစ်ပါတီအာဏာရှင်စနစ်မကျင့်သုံး ခင်ကတည်းက သူပုန်ဆိုတာ ပေါ်ပေါက်ခဲ့တာပါ။ လွတ်လပ်ရေးရပြီး ဦးနုခေတ်မှာဆိုရင် ရောင်စုံသူပုန်..ရန်ကုန်အစိုးရ ဆိုပြီးခေါ်ဝေါ်သမုတ်ခဲ့တာပါ။
လွတ်လပ်ရေးရပြီးစကာလက မြန်မာပြည်မှာ ဗမာလူမျိုးကြီးဝါဒတို့၊ တိုင်းရင်းသားတွေ တန်းတူရည်တူရှိရေးတို့ဆိုတဲ့စကားလုံးတွေလဲမပေါ်သေးပါဘူး။ ဒါပေမယ့်သူပုန်ဆိုတာကတော့ပေါ်နေပါပြီ။ အချို့က ဦးနုကိုအပြစ်ပြော အပုတ်ချချင်လို့ ဦးနုက ဗုဒ္ဓဘာသာကို နိုင်ငံတော်ဘာသာအဖြစ် ပြဋ္ဌာန်းလိုက်လို့ ကချင်သူပုန် တွေပေါ်လာတာဆိုပြီးပြောဆိုကြပါတယ်။
ဒါကလျှောက်ပြောတာပါ။ ဗုဒ္ဓဘာသာ မြန်မာပြည်မှာ ဗုဒ္ဓဘာသာကို နိုင်ငံတော်ဘာသာလုပ်တာ ဘယ်သူမှ ထိခိုက်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်ပါဘူး။ ဒီခေတ်မှာ အီရန်သမ္မတဖြစ်တဲ့သူတောင် သူတို့ရဲ့ ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်ကြီးဆီမှာ ကျမ်းသစ္စာကျိန်ဆိုရတာပါပဲ။
သူတို့တွေလက်နက်ကိုင်ချင်တာနဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာကိုအကြောင်းပြလိုက်တာပါပဲ။အခုထက်ထိလဲအကြောင်းပြ ကောင်းနေကြဆဲပါပဲ။ လူမျိုးရေးတန်းတူရည်တူရှိမှု၊ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရမှုကနေအခုတော့ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေအသစ်တစ်ခုရေးဆွဲဖို့ အထိလုပ်ဆောင်လာနေပါတယ်။ ပြောချင်တာက အစိုးရဘက်က တစ်ခုပေးလိုက် ရင် သူတို့က နှစ်ခုလိုချင်တယ်။ အစိုးရကနှစ်ခုပေးရင် သူတို့ကလေးခုလိုချင်ပါတယ်။
အခုလဲ နိုင်ငံတော်သမ္မတနဲ့ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်တို့ကိုယ်တိုင်က တစ်ဦးအပေါ်တစ်ဦးချစ်ကြည်လေးစားတဲ့ စိတ်ဓာတ်နဲ့သူပုန်ခေါင်းဆောင်အချို့ကိုခေါ်ယူတွေ့ဆုံ၊ ရင်းရင်းနှီးနှီးပြောဆိုကြတာတွေလုပ်ကြပါတယ်။ ဒီလိုမျိုး လုပ်ဆောင်တာတွေအပေါ် သူပုန်တွေဘက်ကဘယ်လိုသုံးသပ်သလဲဆိုရင် သူတို့ဟာအရမ်းကိုအရေးပါလာလို့ အစိုးရခေါင်းဆောင်တွေကိုယ်တိုင်က ဒီလိုမျိုးအလျော့ပေးလာတာလို့မြင်ကြပါတယ်။ အဲလိုမျိုးမြင်အောင် ဘေးတီး ပေးတဲ့သူတွေကလဲ ပေးကြလို့သာ အခုဆိုရင်သူပုန်တွေ စုပေါင်းပြီး ဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဆင်ဖို့အထိလုပ်ဆောင်နေပါပြီ။
ဒါဟာငြိမ်းချမ်းရေးကိုပျက်အောင် တစ်ဖက်လှည့်နဲ့လုပ်နေတဲ့လုပ်ရပ်ဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိဖွဲ့စည်းပုံထဲမှာ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရတိုင်း၊ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရပြည်နယ်တွေသတ်မှတ်ပေးထားပြီး တိုင်း/ပြည်နယ်အလိုက် ၀န်ကြီးချုပ်တွေခန့်ထားပေးပြီးဖြစ်ပါတယ်။
အမှန်ကန်ဆုံးစကားပြောရယင်လက်နက်မကိုင်တော့ဘဲ တိုင်းရင်းသား လူမျိုးတွေ အလိုက်ပြောချင်တာတွေလွှတ်တော်မှာ ပြောလို့ဆိုလို့ရနေပါပြီ။ကချင်မှာဆိုရင်လဲ ဒေါ်ဒွဲဘူ၊ ရှမ်းမှာဆိုရင် ဒေါ်နန်းဝါနု အစရှိသဖြင့်တိုင်းရင်းသားတွေအများကြီးပါ။ ဒီခြားထဲမှာ လူမျိုးစုအလိုက်ဝန်ကြီး တွေလဲ ရှိနေပါတယ်။ ကိုယ်ဒေသကိုယ့်လူမျိုးတွေအုပ်ချုပ်ခွင့်အတွက် ပထမခြေလှမ်းဟာ ၂၀၀၈ခုနှစ်၊ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမှာ ပါပြီး သားပါ။
အစိုးရဘက်ကအလျော့ပေးတာတွေများလေလေ သူပုန်တွေကနင်းလေလေဆိုတာ ဒီခေတ်ကျမှ ဖြစ်ခဲ့တာ မဟုတ်ပါဘူး။သူတို့ခေတ်တုန်းကတည်းကရှိခဲ့တာလို့ဝါရင့်နိုင်ငံရေးသမားကြီးတစ်ဦးကပြောဆိုပါတယ်။ ဟိုခေတ်တုန်း ကငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲတွေလုပ်တုန်းကလဲဒီလိုပါပဲ။မဖြစ်နိုင်တဲ့တောင်းဆိုချက်တွေတောင်းဆိုမယ်..။အစိုးရဘက်က မပေးနိုင်ရင်၊ မလိုက်လျောနိုင်ရင်တော့အစိုးရကငြိမ်းချမ်းရေးကိုလိုလားမှုမရှိဘူးဆိုပြီး သတင်းလွှင့်တော့တာပါပဲ။ အခုလဲ ဖွဲ့စည်းပုံအသစ်ရေးဆွဲတယ်ဆိုတာ မသိမသာစင်ပြိုင်အစိုးရတစ်ရပ်ထူထောင်လိုက်တာပါပဲလို့ ၀ါရင့်နိုင်ငံရေး သမားကြီးက ထောက်ပြပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
အဆုံးစွန်သော စကားပြောရရင် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းမသေဘဲနဲ့ အုပ်ချုပ်နေလဲသူပုန်ဆိုတာရှိနေမှာပါပဲတဲ့။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ လက်နက်ကိုင်ပြီး ချမ်းသာနေတဲ့သူတွေက လက်နက်ကိုင်တာကိုမစွန့်ချင်တော့တာမို့လို့ပြော ရတာလို့သူကပြောပါတယ်။မြန်မာပြည်မှာဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နိုင်ငံတော်သမ္မတဖြစ်လာရင်လဲသူပုန်ဆိုတာရှိနေမှာ ပါပဲတဲ့။အလောင်းအစားလုပ်ရဲတဲ့သူရှိရင်တောင်လောင်းလိုက်ချင်ပါတယ်တဲ့။တကယ်တော့ လက်နက်ကိုင်သူပုန်အဖွဲ့ တွေဟာ သူတို့လူမျိုးတွေကို ကိုယ်စားပြုတဲ့အဖွဲ့မဟုတ် ပါဘူး။ လူမျိုးတစ်မျိုးထဲမှာကို သူပုန်အဖွဲ့က တစ်ဖွဲ့မက ရှိနေတာပါ။ ဒါကြောင့် သူပုန်ဆိုတာ သူပုန်ပါပဲလို့ ၀ါရင့်နိုင်ငံရေးသမားကြီးတစ်ဦးရဲ့ သုံးသပ်ချက်ကို တင်ပြလိုက် ပါတယ်။
ထိုင်းငါးဖမ်းလှေများတွင် မြန်မာများ အလုပ်လုပ်ရန်မသင့်
Posted by drmyochit Sunday, September 15, 2013, under မြန်မာသတင်းများ | No comments
ယမန်နေ့က ထိုင်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်း ဘန်ကောက်မြို့တောင်ဘက် ကီလိုမီတာ ရှစ်ရာေ ကျာ် အကွာတွင်ရှိသော ကတန်မြို့ ဖယ်ကိုကာ ငါးဖမ်းလှေဆိပ်တွင် မြန်မာအလုပ်သမား တစ်ဦး အား မူးယစ်ဆေး ၀ါး ရောင်းချသူ၂ဦးက ၀ိုင်းရိုက်ပြီး တစ်ဦးကို စိတ်ကြွဆေးပြားထည့်၍အမှုဆင် ဖမ်းဆီး ခဲ့ကြောင်းသိရှိရသည်။
လူကုန်ကူးမှုနှင့်အလုပ်သမားအရေးဆောင် ရွက်သည့် ထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့အခြေစိုက် ထိုင်းနိုင်ငံရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားများအဖွဲ့ MAT သို့ အဆိုပါ ငါးဖမ်းလှေဆိပ်အနီးတွင်နေထိုင်သည့် မြန်မာ အလုပ်သမတစ်ဦး က၊ ကဲ့လှေအမှတ်(၁) အနီရောင် ငါးဖမ်းလှေပေါ်တွင် အသက်၂၃ နှစ်အရွယ် ကရင် ဆိုသည့် မြန်မာအလုပ်သမားငယ်တစ်ဦးအား စိတ်ကြွ ဆေးပြားရောင်းချသည့်မြန်မာ၂ဦးက ပုလင်းဖြင့် ဦးခေါင်းကို ရိုက်ခွဲလိုက်သဖြင့် သွေးအိုင်ထဲ တွင်မေ့မြော့ နေကြောင်း မကြာမီ အသက်အန္တရာယ်ပါ ဖြစ်နိုင် ကြောင်း သတင်းပို့ခဲ့ပါသည်။
MAT အဖွဲ့ကလည်း ဒေသခ ရဲအရာရာရှိကြီးအား အကူညီတောင်းခံလိုက်သဖြင့် အသက်ဘေး မှလွတ်မြောက်သွားခဲ့ရသော်လည်း စိတ်ကြွဆေးရောင်းချသူနှစ်ဦးမှာ ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်သွားခဲ့ကြ သည်။ အချိန်အနည်းငယ်အတွင် MAT အဖွဲ့၏ အမာခံ သတင်းပေးတစ်ဦး ဖြစ်သူ ကိုမင်းဇေါ် စီသည့် မော်တော် ဆိုင်ကယ်ခြင်းသို့ စိတ်ကြွဆေးပြား ထည့်၍ အဖမ်းခံရကြောင်းသိရှိခဲ့ရပြန်သည်။
ကိုမင်းဇေါ် က “ကျနော် အသုဘအလှူက ပြန်လာတာ၊ အိမ်မှာထိုင်ရုံပဲရှိသေးတယ်။ ပုလိပ် တွေ ကျနော့်ကိုလာခေါ်တယ်။ စိတ်ကြွဆေးပြား ၅ပြားဆိုင်ကယ်ခြင်းထဲမှာတွေ့လို့တဲ့။ တစ်လုံးကအစစ်၊ လေးလုံးက အတုတဲ့။ ကျနော့်ကို ဆီးလည်းစစ်တယ်၊ ကျနော်က မူယစ်ဆေးဝါးမသုံးစွဲဘူး။ ဒီကိစ္စက အယင်အပတ်ကကျနော့်ကို ပစ်သတ်မလို့ခြိမ်ခြောက်တဲ့ ထိုင်းပါလာတယ်။ ဒီထိုင်းနဲ့ ဆံရှည်ဆိုတဲ့ ဗမာ က အယင်လက MAT အဖွဲ့ဆင်းလာပြီး သူတို့အခန်းမှာ ရှိတဲ့ ဗမာအလုပ်သမားငါးယောက်ကို ဖမ်းကတည်း က ကျနော့်ကိုမကျေနပ်ဘူးလေ။ ဒါကြောင့် အကွက်ဆင်ဖမ်းတာပဲ” ဟုပြောသည်။
မက္ကဆီကိုမြို့တော်တွင် ဆရာများနှင့် ရဲများပဋိပက္ခဖြစ်
မက္ကဆီကိုစီးတီး၊ စက်တင်ဘာ ၁၄။
အဓိကရုဏ်းနှိမ်နှင်းသည့် ရဲရာပေါင်းများစွာ မက္ကဆီကို စီးတီးသမိုင်းဝင်မြို့လယ်နေရာတစ်ခုတွင် မီးလောင်ဗုံးများဖြင့် ပြန်လည်တုံ့ပြန်ကြသော ဆန္ဒပြနေကြသည့် ဆရာများကို ရှင်းလင်းရန် မျက်ရည်ယို ဗုံးများနှင့် ရေပိုက်များသုံးကာ နေရာကိုပြန်လည် ထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့သည်။
ပညာရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုကို ဆန့်ကျင်သည့်အနေနှင့် ဇိုကာလိုရင်ပြင်တွင် ပြုလုပ်သော ဆန္ဒပြပွဲ ရက်သတ္တပတ်များစွာ အကြာ ယခုတစ်ပတ် ပိတ်ရက်များအတွင်း နိုင်ငံ၏လွတ်လပ်ရေးနေ့အခမ်းအနား ကျင်းပရန် နေရာဖယ်ပေးရန် တောင်းဆိုထားသောနောက်ဆုံးရက်ကို ရာနှင့်ချီသည့် ဆန္ဒပြသူများက ကျော်လွန်လာချိန်တွင် သောကြာနေ့ကဖြစ်ပွားသည့် ပဋိပက္ခအတွင်းတွင် အနည်းဆုံး လူ ၄၀ ဒဏ်ရာရှိခဲ့သည်။
အများအားဖြင့်တုတ်များကိုင်ဆောင်ထားပြီး မျက်နှာဖုံးများဝတ်ဆင်ထားသည့် ဆရာများသည် အမျိုးသား နန်းတော်၊ အက်ဇ်တက်အပြိုအပျက်များနှင့် မြို့တော်ဘုရားရှိခိုးကျောင်းကြီးရှိသည့် ဇိုကာလိုရင်ပြင်တွင်းသို့ ရဲများ ဝင်ရောက်မှုကို တားဆီးရန် သတ္တုအတားအဆီးများချထားခြင်း၊ အမှိုက်များကိုမီးရှို့ခြင်းတို့ကို လုပ်ဆောင်ကြသည်။
ဆရာထောင်ပေါင်းများစွာသည် လွန်ခဲ့သည့် သုံးပတ်မှစတင်ကာ ရင်ပြင်တွင်နေရာယူထားခဲ့ခြင်းဖြစ်ကာ ဖယ်ရှားရမည့်နောက်ဆုံးရက်မတိုင်မီ အများစုထွက်ခွာသွားခဲ့ကြပြီး တဲများ အမှိုက်များကို ချန်ထားခဲ့ကြသည်။
ရဲများသည် ရင်ပြင်ကို နာရီဝက်အတွင်းရှင်းလင်းကာ တနာရီကြာပြီးချိန်တွင် ယာယီတဲများမှ ပလတ်စတစ်များကို ဖယ်ရှားပြီးဖြစ်သည်။
ရဲများယခုကဲ့သို့လုပ်ဆောင်ခြင်း မတိုင်မီတွင် သမ္မတအန်ရစ်ပီနာနေးတိုက တနင်္ဂနွေနှင့်တနင်္လာနေ့တွင် ဇိုကာလိုရင်ပြင်တွင် ပြုလုပ်မည့် လွတ်လပ်ရေးအောင်ပွဲအတွက် ဖိတ်ခေါ်မှုတစ်ခုထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
ဘေးလမ်းများတွင်မူ ရဲများနှင့် ဆန္ဒပြသူများကြား ပဋိပက္ခဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသည်။ဆန္ဒပြသူတချို့သည် မျက်နှာဖုံးများတပ်ထားပြီး ကျောက်တုံးများ၊ သံပိုက်များကိုင်ဆောင်ထားကြပြီး ရဲများက ရေများဖြင့်ဖျန်းပက် တုံ့ပြန်ခဲ့ကြသည်။
ပဋ်ိပက္ခအတွင်း အနည်းဆုံး ဆန္ဒပြသူ ၂၉ ဦး ရဲအရာရှိ ၁၁ ဦးဒဏ်ရာရရှိကြောင်း မက္ကဆီကို ကြက်ခြေနီအဖွဲ့နှင့် အမျိုးသားလုံခြုံရေးကော်မရှင်၏ ရဲတပ်ဖွဲ့တို့ထံမှ သိရသည်။
သမ္မတသည် ယခုတစ်ပတ်အတွင်းတွင် ပညာရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုမူတစ်ခုကို အတည်ပြုပေးခဲ့ပြီး ၎င်းမူတွင် ဆရာများသည် မဖြစ်မနေလုပ်ဆောင်ရန်ပြဌာန်းထားသောစွမ်းရည်အကဲဖြတ်ခြင်းကို လုပ်ဆောင်ရန် လိုအပ်ကြောင်းပါရှိပြီး ဆရာများက ဥပဒေသစ်သည် ၎င်းတို့၏အလုပ်သမားအခွင့်အရေးများကို ချိုးဖောက်ကြောင်းပြောကြားကြသည်။
တပ်မတော် အရာရှိ အသတ်ခံရမှု ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန သတင်းထုတ်ပြန်
ကအိုင်အေ(ကချင်)လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့က တိုက်ပွဲအတွင်း ဒဏ်ရာရအရာရှိ အား ဖမ်းဆီးသတ်ဖြတ်ခြင်း
မချမ်းဘောမြို့ဝန်းကျင်အတွင်းပိုင်းနယ် မြေအတွင်းနယ်မြေစိုးမိုးရေး၊စည်းရုံးရေးနှင့်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများထမ်းဆောင်ရန်အတွက်ဩဂုတ်၂၈ရက်တွင်မလွတ်ဒမ်းကျေးရွာမှထွက်ခွာလာခဲ့ရာ ကေအိုင်အေ(ကချင်)လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အင်အား၂ဝခန့်မှအသင့်စောင့်ကြိုတိုက်ခိုက်မှုနှစ်ကြိမ်ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ဖြစ်စဉ်တွင်တပ်မတော်မှအရာရှိတစ်ဦးနှင့်စစ်သည်တစ်ဦးလူစုကွဲပျောက်ဆုံးသွားခဲ့ပြီး ဖြန့်ခွဲရှာဖွေခဲ့ရာစက်တင်ဘာ၁ရက်တွင်စစ်သည်အား ပြန်လည်ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပါသည်။
၂။ပျောက်ဆုံးအရာရှိအား ဆက်လက်ရှာဖွေခဲ့ စဉ် မြေပြင်သတင်း စိစစ်ဖော် ထုတ်ချက်အရ ကေအိုင်အေ(ကချင်)လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တပ်ရင်း(၇)မှတပ်စုမှူးတန်ခမ်ဦးစီးအင်အား၂ဝခန့်သည်ဩဂုတ်၂ရရက်တွင်အင်ခန်ဂါးကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိလာခဲ့ပြီး၂၈ရက်တွင်တပ်အားအသင့်စောင့်ကြိုနှစ်ကြိမ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်း၊၂၉ရက်တွင် ကေအိုင်အေ(ကချင်)လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အင်ခန်ဂါးကျေးရွာမှ ပြန်လည်ထွက်ခွာသွားခဲ့ကြောင်း၊၃ဝရက်တွင် ပျောက်ဆုံးအရာရှိသည် ဘယ်ဘက်လက်မောင်းတွင် လက်နက်ငယ်ဒဏ်ရာဖြင့် အင်ခန်ဂါးကျေးရွာ သို့ ရောက်ရှိလာရာ၎င်းကျေးရွာရှိ ကေအိုင်အေ(ကချင်)လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့နှင့် အဆက်အသွယ် ရှိသူ တစ်ဦးမှသွားရောက်သတင်း ပို့ခဲ့သဖြင့် ကေအိုင်အေ (ကချင်) လက်နက် ကိုင်အဖွဲ့မှ လာရောက်ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ပါသည်။
ဖမ်းဆီးခံအရာရှိအားပြန်လည်ရရှိရေးဆောင်ရွက်နေစဉ်စက်တင်ဘာ၅ရက်တွင်အင်ခန်ဂါးကျေးရွာအနီးနေထိုင်သည့်ဦးဖုန်ဇော်လဆိုင်းနှင့်သားဖြစ်သူမောင်ဖုန်ဇောင်ခင်ဆိုင်းတို့မှ ၎င်းတို့တောင်ယာအနီးတွင် အပုပ်နံ့ ရရှိကြောင်းတပ်မတော် သို့လာရောက် အကြောင်းကြားသဖြင့်လိုက်လံရှာဖွေရာအင်ခန်ဂါးရွာ၏မြောက်ဘက်မီတာ၁ဝဝဝခန့်အကွာ တောင်ယာသွားလမ်း၏ညာဘက်ကိုက်၁ဝဝဝခန့်ရှိ တောင် စောင်းနေရာတွင် မြေပုံတစ်ခုအား တွေ့ရှိခဲ့ပြီးတူးဖော်ကြည့်ရာ ကေအိုင်အေ(ကချင်)လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့မှဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားခဲ့သည့်အရာရှိအားရက်စက်စွာဦးခေါင်းဖြတ်သတ်ဖြတ်ပြီး မြှုပ်နှံထားသည်ကို တွေ့ရှိခဲ့ရပါသည်။
အားအလေးအနက်ထားလုပ်ဆောင်လျက်ရှိပြီး တွေ့ကြုံရသည့်အခက်အခဲ၊သဘောထားကွဲလွဲမှုနှင့်နားလည်မှုလွဲမှားသောပြဿနာများအားသဘောထားကြီးမားစွာဖြင့်ထိန်းသိမ်း ဖြေရှင်းမှုများလုပ်ဆောင်လျက်ရှိပါသည်။တပ်မတော်မှထိုသို့ဆောင်ရွက်ချက်ရှိသော်လည်း ကေအိုင်အေ(ကချင်)လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အနေဖြင့် ပြည်ထောင်စုငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်မှုကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်စဉ်အချိန်တွင်ပင်ဖမ်းဆီးရမိသည့်အရာရှိအားရက်စက်စွာသတ်ဖြတ်ခဲ့ကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။
သို့ဖြစ်ပါ၍ဖမ်းဆီးထားသောအရာရှိအားရက်စက်စွာသတ်ဖြတ်ခဲ့ကြသည့်လူသတ်မှုကျူးလွန်သူ ကေအိုင်အေ(ကချင်)လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တပ်ရင်း(၇)မှတပ်စုမှူးတန်ခမ်နှင့်အပေါင်းပါ၂ဝခန့်အားတရားဥပဒေနှင့်အညီအရေးယူဆောင်ရွက်နိုင်ရေးမချမ်းဘောမြို့နယ် ရဲတပ်ဖွဲ့စခန်းတွင် သက်ဆိုင်ရာမှ အမှုဖွင့်လှစ်ထားရှိကြောင်း သိရပါသည်။
မူဆလင်များမှ ငါးနှစ်သမီးကလေးအား အုပ်စုဖွဲ့ မုဒိမ်း...
ဓာတုလက်နက်များကို ဆီးရီးယားနိုင်ငံတစ်ဝန်းတွင် ဖြန့...
" ဇိမ် " ကာရာအိုကေဆိုင်အား အရွယ်မရောက် သေးသူများကု...
ကိုယ်စားပြုနိုင်ငံက အသိအမှတ်မပြုသည့် မယ်ကမ္ဘာပြိုင်...